Ingabe Uhlobo Lokuqala Lweshukela Lempesheni kufanelekile > Isifo sikashukela
Ukukhubazeka kwesifo sikashukela
Abantu abanesifo sikashukela kufanele bahlale belwa nenkinga yabo ukuze badambise inhlala-kahle yabo. Futhi ngesimo esiyinkimbinkimbi sesifundo salesi sifo, udinga usizo lwangaphandle, ngoba isifo sikashukela simenza angakwazi ukuxhomekeka emithini eminingi. Kulokhu, ukwesekwa kombuso kubaluleke kakhulu, ngakho-ke umbuzo wokuthi ngabe ukukhubazeka kunikezwa ku-mellitus yesifo sikashukela noma cha kuhlala kuhlala kufanelekile.
Yiziphi izinto ezithonya ukuqashelwa kokukhubazeka
Ngeshwa, ukuba khona kwesifo akuhlinzeki ngomyalo wokukhubazeka. Ukuze ikhomishini inqume ukuthi ungawunikeza iqembu lesifo sikashukela, kufanele kunikezwe izimpikiswano ezisindayo. Futhi ukuba khona koshukela egazini ngaphandle kwemiphumela emibi nezifo ezingamahlalakhona ezikhuliswe ngokumelene nalesi sizinda akuyona into ekhombisa ukwabiwa kokukhubazeka.
Lapho ubuzwa ukuthi isifo sikashukela sikhubazekile noma cha, kunempendulo engemihle. Ngalesi, ezinye izimo ziyabhekwa.
Kungaphansi kwaziphi izimo lapho umuntu onesifo sikashukela efanelekile kunoma yiliphi iqembu lokukhubazeka? Kubangelwa ubukhulu besifo, uhlobo lwayo nezifo ezihambisana nayo. Ngakho-ke, kuyacatshangelwa:
uhlobo lwesifo sikashukela (2 noma 1) esitholakele, esincike ku-insulin noma cha,
amandla okubuyisela ushukela wegazi,
ukutholwa kwezinkinga ezahlukahlukene ngokumelene nesizinda sesifo,
ukuvela kwezinye izifo ngaphansi kwethonya le-glycemia,
Imikhawulo yempilo ejwayelekile (ukuthi kungenzeka ukunyakaza okuzimele, ukubhekisisa imvelo, ukusebenza).
Indlela yenkambo yesifo nayo ibalulekile. Onesifo sikashukela, kukhona:
mnene - ngosizo lokudla, kungenzeka ukuthi kulondolozwe izinga le-glucose ejwayelekile kwisifo sikashukela, lokhu kuvame ukuba isigaba sokuqala, kumakwe isimo esanelisayo ngaphandle kokubonisa ubunzima,
phakathi - ushukela wegazi udlula i-10 mmol / l, ukhona inani elikhulu umchamo, ukulimala kwamehlo nokukhubazeka okubukwayo kuyabonakala, ukusebenza kwezinso kukhubazekile, izifo ze-endocrine system, i-gangrene iyangezwa, umsebenzi wokusebenza ulinganiselwe, amathuba wokuzinakekela akhona, isimo esijwayelekile sibuthakathaka,
kakhulu - ukudla nokudla izidakamizwa kuphumelela, izinga le-glucose liphezulu kakhulu kunokujwayelekile, kuvela izinkinga eziningi, kunengozi yesifo sikashukela, ukusakazeka kwezifo zemilwelwe, zonke izinhlelo zomzimba ezifikelwa izifo, nokukhubazeka okuphelele kuyaphawulwa.
Amaqembu akhubazekile ohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela
Ukuthi iqembu lokukhubazeka linikezwa yini uma kunesifo sikashukela esincike ku-insulin noma uhlobo 2 lwesifo sikashukela esingaxhomekeki ku-degree yesifundo salo, ubunzima kanye nomthelela wokusebenza okugcwele kwempilo. Ake sibheke kabanzi ukuthi yikuphi ukukhubazeka kweqembu okungatholakala ngokulandela isifo.
Iqembu lokuqala linikezwa izinhlobo ezikhulayo zesifo sikashukela. Izizathu zokuthola kwakho yilezi:
I-hypo- ne-hyperglycemic coma enokubonakaliswa njalo,
ukuhluleka kwenhliziyo ngokweziqu ze-III,
isifo esingalapheki esinokulungiswa izinso nesibindi,
ukungaboni kwamehlo womabili
i-encephalosis, ehambisana nokulimala kwengqondo, i-neuropathy, ukukhubazeka komzimba, i-ataxia,
ukunqotshwa kwemikhawulo nge-gangrene,
isifo sikashukela sikashukela.
Lokhu kubheka ukulahleka kokuma endaweni, ukungakwazi ukuhamba ngokuzimela nokwenza noma yimuphi umsebenzi. Abantu abanaleli qembu badinga ukunakwa okukhethekile nokuqashwa njalo odokotela.
Ukuthola iqembu lesibili lokukhubazeka kwesifo sikashukela kususelwe kwizibonakaliso ezilandelayo:
i-neuropathy ku-II degree nge-paresis enzima,
ukulimala kwe-retina (II - III degree),
ukuphazamiseka kwengqondo nge-encephalosis,
ukwehluleka kwezinso, i-nephrosis.
Ukuzivocavoca umzimba kuncishiswa amandla amancane okuhambisa, ukuzisebenzela nokwenza noma yimuphi umsebenzi. Ngezikhathi ezithile, ukubhekwa kwezokwelapha kuyadingeka.
Iqembu lesithathu linikezwa ngezigaba ezingekho emthethweni zesifo sikashukela. Ukwephulwa okuncane kuyabonakala, ngaphandle kwezinkinga ezinkulu. Amandla okuhamba acishe angaphazanyiswa, kunamathuba wokuziqapha ngokuzimele wenze imisebenzi ethile yomsebenzi. Izimo zaleli qembu lokukhubazeka zibandakanya nesikhathi sokuqeqeshwa nokuthola umsebenzi ngabashukela abancane.
Inkomba enkulu yokwabiwa kweqembu labakhubazekile ukungakwazi nokuhluleka kwenkululeko ekunakekelweni kwabo.
Enganeni enesifo sikashukela i- mellitus ku-insulin, ngaphambi kokufika eminyakeni engu-18 ubudala, ukukhubazeka kuboniswa ngaphandle kweqembu. Ngemuva kokufika eminyakeni yobudala, kuzodingeka ukuthi enze ikhomishini enikezwe umsebenzi wokukhubazeka.
Ukukhubazeka ngesifo sikashukela sohlobo 2, njengohlobo 1, kungatholakala ngokulandela lezi zinyathelo:
yiya ku-Therapist noma uye esibhedlela ubheke zonke izivivinyo,
thola isitifiketi sokudluliselwa ekuhlolweni (i-ITU).
Odokotela, izivivinyo, izivivinyo
Ukuthi ukukhubazeka kufanelekile yini sikashukela kunqunywa yi-ITU. Isisekelo salokhu iziphetho odokotela abaziphasisile, imiphumela yokuhlaziya nokuhlolwa.
Ekuqaleni, ngenqubo ezimele yekhomishini eqenjini, kuyadingeka ukuvakashela oweluleki wendawo okhombisa isisusa sokukhubazeka. Kufanele anikeze inkomba yokuvakasha okuphoqelekile kudokotela wezifo zamehlo, udokotela ohlinzayo wezinzwa, udokotela ohlinzayo, owenhliziyo nabanye ochwepheshe ngokusezingeni lesifo sikashukela.
Isiguli sikashukela sibuye sithunyelwe ukuze siyohlolwa nokuhlolwa kwezifo zokuxilonga. Ukuthola iqembu kuzodingeka uhlole:
Ukuhlaziywa komtholampilo kwegazi nomchamo,
ushukela osheshayo kanye nosuku lonke,
umchamo weshukela ne-acetone,
isivivinyo sokulayisha ushukela
Isimo senhliziyo sisebenzisa i-electrocardiography
ukuphazamiseka ohlelweni lwezinzwa,
ukuba khona kwezilonda kanye nezinduna,
uma kwenzeka wephula umsebenzi wezinso - umchamo eceleni kweRib, i-CBS, isivivinyo se-Zimnitsky, umchamo phakathi nosuku,
Uhlu lwamadokhumenti adingekayo luhlanganisa:
isitatimende esivela kumuntu odinga ukukhubazeka noma ummeleli wakhe osemthethweni,
omazisi - ipasipoti, isitifiketi sokuzalwa,
Ukuqondiswa kwe-ITU, eklanyelwe ngokuya ngemodeli - ifomu No. 088 / у-0,
ukukhipha ukuhlolwa okuvela esibhedlela lapho kwenzeke khona,
ikhadi lesikhathi sokugula,
iziphetho zochwepheshe zidlulile,
imiphumela yokuhlolwa - izithombe, ukuhlaziya, i-ECG, njll.
okwabafundi - isimilo esihlanganiswe nguthisha,
zabasebenzi - amakhophi wamakhasi asencwadini yokusebenza kanye nezimpawu ezivela endaweni yomsebenzi,
izisulu zengozi emsebenzini - isenzo sengozi ngesiphetho sochwepheshe, isiphetho sebhodi yezokwelapha,
uma kungenzeka udlulisele ukukhubazeka okuphindaphindiwe - idokhumenti eqinisekisa ubukhona bokukhubazeka, uhlelo lokuvuselela kabusha.
Lapho zonke izivivinyo seziphothuliwe nemibhalo iqoqwe, ukwabiwa kweqembu elidingekayo kunqunywa kususelwa kwimiphumela ye-ITU. Uma umuntu onesifo sikashukela engavumelani nesiphetho sekhomishini, angaphonswa inselelo. Ekuqaleni, kuthunyelwa isitatimende sokungavumelani nesiphetho se-ITU. Kungakapheli inyanga, inqubo yokwabela abakhubazekile kumele yenziwe. Ngaphandle kwalokho, ungaya enkantolo icala. Kodwa-ke, ngemuva kokuqulwa kwecala lesi sinqumo asisafanele sikhalaze.
Njengoba ubona, akuyena wonke umuntu onesifo sikashukela onelungelo lokunikeza iqembu lokukhubazeka.Ukuze uthole usizo lombuso lwesifo esinjalo, umuntu kufanele afakazele umphumela obekiwe wesifo sikashukela emzimbeni kanye nokungenzeki kokuzimela ngokuzimele ngendlela yokuphila ejwayelekile. Abantu abaphethwe yilesi sifo ngokuvamile bazibuza ukuthi ngabe bayimpesheni yesifo sikashukela. Kepha izinkokhelo zempesheni zenziwa kuphela ekufikeni kweminyaka yokuthatha umhlalaphansi. Uma kwenzeka ukugula, usizo lwezezimali lunikezwa kuphela lapho ekhona amaqembu akhubazekile.
Ngaphandle kwalokhu, wonke umuntu onesifo sikashukela unelungelo elingokomthetho lokuthola imihlomulo yombuso. Mahhala
imivimbo yokuzihlola ye-glucose yegazi,
izidakamizwa ukwehlisa ushukela.
Futhi, ngenhloso yokuvimbela, mahhala, izingane zesifo sikashukela zinikezwa ukuphumula kuma-sanatoriums kanye ngonyaka.
Ukuthola ukukhubazeka ngesizathu esihle kubaluleke kakhulu kumuntu onesifo sikashukela. Ukunikeza iqembu kuvumela umuntu onesifo sikashukela ukuthi athole usizo lwezezimali, aludinga ngempela, angakwazi ukusebenza. Ngaphezu kwalokho, abantu abakhubazekile abanesifo sikashukela kumele bathunyelwe ukuze bavuseleleke. Lokhu kusiza ukwenza ngcono isimo esivamile seswekile futhi kunwebe nempilo yakhe.
Kodwa-ke, noma ngabe ngabe yimiphi imiphumela yokuhlolwa kokukhubazeka, kuyadingeka ukuthi uzibhekele ngokusobala isimo sempilo yakho, ulandele ngokucophelela izincomo zabodokotela futhi ufune usizo ngokushesha uma kwenzeka impilo ingeyinhle.
Uhlobo 2 lokukhubazeka kwesifo sikashukela
Isifo sikashukela yisifo esibonakaliswa kuso ushukela omkhulu wegazi. I-Pathology ihlotshaniswa nokwakheka okunganele kwe-hormone insulin (uhlobo 1 lwesifo) noma ukwephulwa kwesenzo sayo (uhlobo 2).
Ngokuqhubeka kwesifo sikashukela, izinga lempilo yabantu abagulayo liyawohloka. Umuntu onesifo sikashukela ulahlekelwa amandla okuhamba, bheka, ukuxhumana. Ngezinhlobo ezinzima kakhulu zesifo, ukuma ngesikhathi, isikhala siyaphazamiseka.
Uhlobo lwesibili lwesifo lwenzeka kubantu asebekhulile futhi, njengomthetho, zonke iziguli zesithathu zifunda ngokugula kwakhe kakade ngokumelene nesizinda sokubukeka kwezinkinga ezinzima noma ezingalapheki. Iziguli ziyaqonda ukuthi isifo sikashukela yisifo esingelapheki, ngakho-ke bazama ukugcina isimo sinxephezela ngokunxephezelwa kwe-glycemic.
Ukukhubazeka ngesifo sikashukela sohlobo 2 kungumbuzo obuzwa njalo oxoxwa phakathi kweziguli uqobo, izihlobo, iziguli nabodokotela bazo abakhona. Wonke umuntu unesifiso ngombuzo wokuthi isifo sikashukela sohlobo 2 sikunikeza yini ukukhubazeka, futhi uma kunjalo, singatholakala kanjani. Okuningi ngalokhu esihlokweni.
Kancane ngesifo sikashukela sohlobo 2
Le ndlela yalesi sifo ibonakala ngokumelana ne-insulin, okungukuthi, isimo lapho amaseli nezicubu zomzimba womuntu eyekayo ukuphendula esenzweni se-pancreatic hormone insulin. Yenzelwe futhi iphonswe emgodini wegazi ngamanani anele, kepha imane "ayibonwe."
Ekuqaleni, insimbi izama ukunxephezela leso simo ngokukhiqiza izinto ezisebenza kakhulu ngama-hormone. Kamuva, isimo sokusebenza siyaphela, i-hormone ikhiqizwa kancane kakhulu.
Isifo sikashukela sohlobo 2 sithathwa njengesifo esijwayelekile, esibalelwa ngaphezu kwe-80% yazo zonke izimo ze- "sifo esiphundu". Ukhula, njengomthetho, emva kweminyaka engama-40 kuya kwengama-5, kaningi ngokumelene nesizinda se-pathological body mass noma ukungondleki.
Isiguli sinikezwa nini iqembu lokukhubazeka?
Ukukhubazeka ngohlobo 2 lwesifo sikashukela sohlobo lwesibili kungenzeka, kepha kulokhu isimo sesiguli kufanele sihlangabezane nenqubo ethile ehlolwe ngamalungu ekhomishini yochwepheshe bezokwelapha nezenhlalo:
umthamo womsebenzi - ithuba lomuntu alithathiwa nje ukwenza imisebenzi ejwayelekile, kepha futhi nolunye uhlobo, umsebenzi olula,
amandla okuhamba ngokuzimela - abanye abanesifo sikashukela, ngenxa yezinkinga ezivela emikhunjini, badinga ukunqunywa kwengalo eyodwa noma zombili eziphansi,
ukubhekisisa ngesikhathi, isikhala - izinhlobo ezinzima zesifo zihambisana nokuphazamiseka kwengqondo,
ikhono lokuxhumana nabanye abantu
Isimo esijwayelekile somzimba, izinga lesinxephezelo, izinkomba zaselebhu, njll.
Kubalulekile! Ukuhlola isimo seziguli ngokuya ngezinqubo ezingenhla, ochwepheshe banquma ukuthi yiliphi iqembu elibekwa esimweni ngasinye somtholampilo.
Lesi sigaba singanikezwa isiguli ezimweni ezilandelayo:
i-pathology ye-visual analyzer, ehambisana nokuncipha okubukhali kombono noma ukulahleka kwayo ngokuphelele kwamehlo noma kuwo womabili,
ukulimala kohlelo lwezinzwa oluphakathi, kubonakaliswa ukuphazamiseka kwengqondo, ukwazi ukungasebenzi kahle, ukuzilolonga,
i-neuropathy, ehambisana nokukhubazeka, i-ataxia,
CRF isigaba 4-5,
ukwehluleka kwenhliziyo okunzima
ukwehla okubucayi koshukela wegazi, okuphindwe kaningi.
Njengomthetho, abanesifo sikashukela ngokunokwenzeka abakwazi ukuhamba ngaphandle kosizo, bahlushwa isifo sokuwohloka komqondo, futhi kunzima ngabo ukuxhumana nabanye. Iningi linokunqunywa kwemikhawulo engezansi, ngakho-ke azihambi lodwa.
Ukuthola leli qembu lokukhubazeka kungenzeka kulezi zimo ezilandelayo:
ukulimala kwamehlo, kepha hhayi kangako njengokukhubazeka kweqembu 1,
isifo sokuqina kwesifo sikashukela,
ukwehluleka kwezinso, kuhlanganiswe nokuhlanjululwa kwegazi okusiza nge-hardware noma ukuhlinzwa kokufakwa kwezitho,
ukulimala kohlelo lwezinzwa olungemuva, oluboniswa yi-paresis, ukwephulwa okuqhubekayo kokuzwela,
imikhawulo ekwenziweni kokuhamba, ukuxhumana, ukukhonzwa ngokuzimela.
Kubalulekile! Abantu abagulayo kuleli qembu badinga usizo, kepha abaludingi amahora angama-24 ngosuku, njengasekuqaleni.
Ukusungulwa kwalesi sigaba sokukhubazeka kushukela kungenzeka ngokuqina kwesifo, lapho iziguli zingakwazi ukwenza umsebenzi wazo ojwayelekile. Ochwepheshe bekhomishini yezazi zezokwelapha nezenhlalo iphakamisa ukuthi labo bantu abanesifo sikashukela bashintshe izimo zabo ezijwayelekile zomsebenzi ukuze benze umsebenzi olula.
Yini inqubo yokusungula ukukhubazeka?
Okokuqala, isiguli kufanele sithole ukudluliselwa ku-MSEC. Lo mbhalo ukhishwa yisikhungo sezokwelapha lapho isifo sikashukela sigcina khona. Uma isiguli sinezitifiketi zokwephulwa kwemisebenzi yezitho nezinhlelo zomzimba, isiphathimandla sokuvikela umphakathi singakhipha nokudluliselwa.
Uma isikhungo sezokwelapha senqaba ukunikeza umuntu okudluliselwe kuye, umuntu unikezwa isitifiketi angaphendukela kuso ngokuzimele ku-MSEC. Kulokhu, umbuzo wokusungula iqembu lokukhubazeka wenzeka ngendlela ehlukile.
Ngokulandelayo, isiguli siqoqa imibhalo edingekayo. Uhlu lubandakanya:
ikhophi nomsuka wepasipoti,
ukuthumela nokusebenzisa izidumbu ze-MSEC,
ikhophi nencwadi yokuqala yencwadi yomsebenzi,
umbono kadokotela ohambela yonke imiphumela yokuhlolwa okudingekile,
isiphetho sokuhlolwa kongcweti abancane (udokotela ohlinzayo, udokotela wezifo zamehlo, udokotela wezifo zamehlo, i-nephrologist),
ikhadi lesikhathi sokuphuma kwesiguli.
Uma isiguli sithola ukukhubazeka, ochwepheshe kwikhomishini yezochwepheshe yezokwelapha nezenhlalo bakha uhlelo olukhethekile lokuvuselela lo muntu. Ivumelekile isikhathi kusukela osukwini lokunqunywa kokungakwazi ukwenza umsebenzi kuze kube yilapho kubuye kuhlolwa kabusha okulandelayo.
Izinzuzo zabakhubazekile beshukela
Kungakhathaleki ukuthi yisiphi isizathu lapho kwasungulwa khona isimo sokukhubazeka, iziguli zinelungelo lokusizwa nesimo nezinzuzo ezigabeni ezilandelayo:
ukunakekelwa kwezempilo kwamahhala
ukudala izimo zokuphila ezifanele,
ezokuhamba zamahhala noma ezingabizi,
Izingane zivame ukuba nohlobo lwesifo oludinga i-insulin.Bathola ukukhubazeka lapho sebefinyelele ebudaleni, kugcwaliswa kuphela iminyaka eyi-18.
Kunamacala aziwayo wokuthuthuka kwesifo sikashukela sohlobo 2 ezinganeni. Kulokhu, ingane ithola usizo lombuso ngendlela yezinkokhelo zanyanga zonke.
Iziguli zinelungelo kanye ngonyaka lokukhulula ukwelashwa kwe-spa. Udokotela ohambelayo ubhala imiyalelo yemishanguzo edingekayo, i-insulin (ngesikhathi sokwelashwa kwe-insulin), isirinji, uvolo okotini, amabhandishi. Njengomthetho, lawo malungiselelo wokukhetha anikezwa emakhemisi wombuso ngenani elanele lezinsuku ezingama-30 zokwelashwa.
Uhlu lwezinzuzo lubandakanya le mithi elandelayo, ekhishwa mahhala:
izidakamizwa ze-hypoglycemic zomlomo,
izidakamizwa ezenza ngcono ukusebenza kwamanyikwe (ama-enzyme),
izidakamizwa ezibuyisela izinqubo ze-metabolic,
ama-thrombolytics (anciphisa igazi)
i-cardiotonics (izidakamizwa zenhliziyo),
Kubalulekile! Ngaphezu kwalokho, abantu abakhubazekile kunoma yiliphi iqembu banelungelo lokuthola impesheni, inani elivunyelwe ngumthetho ngokuya ngeqembu elikhubazekile elikhona.
Ungakuthola kanjani ukukhubazeka kwisifo sikashukela wudaba ongahlala uthintana ngalo nodokotela wakho we-endocrinologist noma uchwepheshe ovela kwiKhomishini ye-MSEC.
Nginombono wokuthi ngeke nginqabe: inqubo yokuthola ukukhubazeka ibhekwa njengenqubo ende, kepha kusafanelekile ukuzama ukufeza ukusungulwa kokukhubazeka. Wonke umuntu onesifo sikashukela kufanele angazi nje ngezibopho zakhe (ukufeza isimo sesinxephezelo), kodwa futhi ngamalungelo nezinzuzo.
Ukuqashwa kweziguli ezinesifo sikashukela
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zale endology ye-endocrine. Uhlobo lwe-1 isifo sikashukela isimo umuntu ahlupheka ngaso lapho kukhiqizwa i-insulin. Lesi sifo senza ukudalwa kwaso ezinganeni nakubantu abasha. Ukuntuleka kwe-hormone yayo uqobo ngamanani anele kwenza ukuthi kudingekile ukuwujova. Kungakho uhlobo lwe-1 lubizwa ngokuthi yi-insulin-led noma olusebenzisa i-insulin.
Lezi ziguli zivame ukuvakashela i-endocrinologist futhi zinikeze i-insulin, imichilo yokuhlola, izingqimba zeglucometer. Inani lokuhlinzekelwa okhethwayo lingahlolwa nodokotela ohambelayo: liyahlukahluka ezifundeni ezihlukile. Uhlobo 2 sikashukela lukhula kubantu abangaphezulu kweminyaka engama-35. Kuhlotshaniswa nokwehla kokuzwela kwamangqamuzana ukuya ku-insulin, ukukhiqizwa kwe-hormone akuphazamiseki ekuqaleni. Iziguli ezinje ziphila impilo ekhululekile kunabantu abanesifo sikashukela sohlobo 1.
Isisekelo sokwelashwa ukulawula kokudla okunempilo nezidakamizwa ezinciphisa ushukela. Isiguli singathola ukunakekelwa ngezikhathi ezithile noma ngaphandle kokugula. Uma umuntu egula ngokwakhe futhi eqhubeka nokusebenza noma enakekela ingane enesifo sikashukela, uzothola ishidi lokukhubazeka lesikhashana.
Izizathu zokukhipha ikhefu lokugula kungaba yilezi:
ukubulawa kwemali yesifo sikashukela,
ukuphazamiseka okukhulu noma ukwanda kwezifo ezingamahlalakhona,
Isifo Sikashukela kanye nokukhubazeka
Uma inkambo yalesi sifo ihambisana nokuwohloka kwempilo, ukulimala kwezinye izitho, ukulahleka kancane kancane komthamo wokusebenza kanye namakhono wokuzinakekela, bakhuluma ngokukhubazeka. Noma ngabe ukwelashwa, isimo sesiguli singase sibe sibi kakhulu. Kunama-degree ama-3 wesifo sikashukela:
Easy. Isimo sinxephezelwa kuphela ngokulungiswa kokudla, izinga lokuzila kwe-glycemia aliphezulu kune-7.4 mmol / l. Ukulimala emithanjeni yegazi, izinso noma uhlelo lwezinzwa lwe-1 degree kungenzeka. Akukho ukwephulwa kwemisebenzi yomzimba. Lezi ziguli azinikezwa iqembu lokukhubazeka. Isiguli singabikwa ukuthi asinakwazi ukwenza umsebenzi wobungcweti obukhulu, kodwa singasebenza kwenye indawo.
Okuphakathi. Isiguli sidinga ukwelashwa kwansuku zonke, ukwanda kokushukela okusheshayo kuye ku-13.8 mmol / l kungenzeka, ukulimala kwe-retina, i-peripheral neva system, nezinso kuya ku-2 degrees. Umlando wokukhohlisa ne-precoma awukho. Iziguli ezinjalo zinokukhubazeka okuthile nokukhubazeka okuthile, okungenzeka kukhubazekile.
Isindayo. Ezigulini ezinesifo sikashukela, ukukhuphuka kukashukela ngaphezulu kwe-14.1 mmol / L kuyaqoshwa, lesi simo singanda ngokuzwakalayo ngisho nangasemuva kokwelashwa okukhethiwe, kunezinkinga ezinkulu. Ubulukhuni bezinguquko zokwe-pathological ezithweni eziqondisiwe zingalinyazwa kakhulu, futhi izimo ezibulalayo (ngokwesibonelo, ukwehluleka kokuqina kwezinso) nazo zifakiwe. Abasakhulumi ngethuba lokusebenza, iziguli azikwazi ukuzinakekela. Banikezwa ukukhubazeka kwesifo sikashukela.
Izingane zifanelwe ukunakwa ngokukhethekile. Ukutholwa kwalesi sifo kusho isidingo sokwelashwa okuqhubekayo nokubhekwa kwe-glycemia. Ingane ithola izidakamizwa zesifo sikashukela kusuka kwisabelomali sesifunda ngenani elithile. Ngemuva kokuqokwa kokukhubazeka, uthi kweminye imihlomulo. Umthetho wobumbano othi “On the pension state state in Russian Federation” ulawula ukuhlinzekwa kwempesheni kumuntu onakekela ingane enjalo.
Impendulo inguyebo. Kepha, njengokujwayelekile, lapho kulungiswa ezinye izinzuzo nemibhalo edingekayo, kuphakama ubunzima obuhlukahlukene.
Isimo esibaluleke kakhulu sokufinyelela impesheni yokukhubazeka kwabashukela kusenesikhathi yimibhalo efanelekile. Udinga ukuxhumana nodokotela. Bazokutshela ukuthi wenze uhlolo lonke lokuhlolwa. Bazonikeza izinkomba ezahlukahlukene kodokotela abahlukahlukene. Kuzofanele udlule kukho konke. Ngamunye wabo uzozenzela isifo sakhe.
Ngemuva kwalokho, bazobhala isiphetho esivamile ngokuya ngemiphumela yakho. Uma ngabe iKhomishani Yezokwelapha Ngokuvuselelwa Kwezokwelapha (i-MERC) ikunikeza isiphetho sokuthi ukhubazekile ngenxa yesifo sikashukela, unelungelo lokuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi.
Ngemuva kokuba isiphetho sisezandleni zakho, udinga ukusisebenzisa, futhi ungathatha umhlalaphansi ngokuphephile.
Uma abaphathi bezokuvikela ngandlela thile lokhu, unelungelo lokuya enkantolo. Qiniseka futhi ungesabi. Umthetho usehlangothini lwakho. Uma ukhubazekile, ungathatha umhlalaphansi uma unesifo sikashukela ngaphandle kweminyaka yakho.
Kepha kuyenzeka futhi ukuthi ukhubazekile ngenxa yesifo sikashukela, kepha awukanikwa isiphetho ngalokhu. Futhi banikeza isiphetho bethi uphilile noma okunye, kepha hhayi ukukhubazeka ngenxa yesifo sikashukela. Futhi awazi ukuthi wenzeni kulesi simo.
Amakhemisi asafuna ukubuyela kushukela. Kukhona umuthi wesimanje waseYurophu onengqondo, kodwa bathula ngakho. Lokho.
Ngokomthetho, uma wenqatshwa, ikhomishini ye-MRE ibophekile ukuthi ikunikeze isitifiketi sezokwelashwa, futhi, nakanjani, chaza ukuthi kungani wenqatshelwa uqinisekisa ukukhubazeka kwakho. Uma ungazimisele ukuchaza ukuthi kungani wenqatshwa, khona-ke futhi unelungelo lokufaka isimangalo ophikisana nesikhungo sezokwelapha lapho kwahlolwa khona khona futhi kwanikezwa umbono.
Uma unikezwe konke, kepha awuvumi, ungafaka isikhalo ekuphethweni kwe-MREC. Ukuze ufake isicelo esinjalo, uzodinga ukuxhumana noMnyango Wezempilo waseRussia Federation. Lapho uhambisa imibhalo, kungakuhle futhi ukuthi ubhale lapho ukuthi uyisakhamuzi esigcwele seRussian Federation.
Inkonzo izodingeka ukuthi ibukeze isicelo sakho. Ngenxa yalokhu, uzokwabelwa ukuhlolwa okusha, kungaba ukuqinisekisa isiphetho, noma ukuphikisa. Uma ukugula kwakho kuqinisekisiwe ngesikhathi sokuhlolwa, ngokuqinisekile uzothola impesheni yokukhubazeka njengesiguli esinesifo sikashukela.
Ngaba nesifo sikashukela iminyaka engama-31. Usephilile manje. Kepha, la makhukhi awafinyeleleki kubantu abavamile, akafuni ukuthengisa ama-pharmacies, akusizuzi ngawo.
Isiguli noma ummeleli wakhe ucela umuntu omdala noma ingane i-endocrinologist endaweni ahlala kuyo. Isizathu sokudluliselwa kwi-ITU (iKhomishini Yesazi Yezempilo) yile:
ukubuyiswa kwesifo sikashukela ngezindlela ezingasebenzi zokuvuselela,
inkambo enzima yesifo,
iziqephu ze-hypoglycemia, ketoacidotic coma,
ukubukeka kwephula imisebenzi yezitho zangaphakathi,
isidingo sencomo yabasebenzi yokuguqula izimo kanye nohlobo lomsebenzi.
Udokotela uzokutshela ukuthi yiziphi izinyathelo okudingeka uzithathe ukuze ugcwalise amaphepha. Imvamisa, abanesifo sikashukela babhekana nezivivinyo ezinjalo:
ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile
ukukala ushukela wegazi ekuseni naphakathi nosuku,
Izifundo ze-biochemical ezibonisa izinga lesinxephezelo: i-glycosylated hemoglobin, i-creatinine ne-urea yegazi,
ukucaciswa komchamo ushukela, amaprotheni, i-acetone,
umchamo ngokwakwaZimnitsky (uma kwenzeka umsebenzi wokulimala we-renal),
i-electrocardiography, ukuhlolwa kwehora le-24 kwe-ECG, umfutho wegazi ukuhlola ukusebenza kwenhliziyo,
I-EEG, ukutadisha ngemikhumbi ye-cerebral ekuthuthukiseni i-encephalopathy yesifo sikashukela.
Odokotela bahlola amakhono ahlobene nalokhu: i-ophthalmologist, udokotela oyi-neurologist, udokotela ohlinzayo, udokotela oyi-urologist. Ukuphazamiseka okubalulekile kwemisebenzi yokuqonda nokuziphatha kuyizinkomba zokucwaninga kokuhlolwa kwengqondo nokubonisana nodokotela wezifo zengqondo. Ngemuva kokuphasa izivivinyo, isiguli sithola ikhomishini yangaphakathi yezokwelapha esikhungweni sezokwelapha lapho ibhekwa khona.
Uma kutholakala izimpawu zokukhubazeka noma isidingo sokwakha uhlelo lokuvuselela umuntu oyedwa, udokotela oholayo uzongena yonke imininingwane ngesiguli esefomini 088 / y-06 bese eyithumela e-ITU. Ngaphezu kokubhekisela kwikhomishini, isiguli noma izihlobo zakhe ziqoqa eminye imibhalo. Uhlu lwabo luyahlukahluka ngokuya ngesimo sikashukela. I-ITU ihlaziya amadokhumenti, yenza ukuhlolwa bese ithatha isinqumo sokunikeza iqembu labakhubazekile noma cha.
Ochwepheshe bahlola ubungako bokwephula umthetho futhi babela iqembu elithile lokukhubazeka. Iqembu lesithathu lakhiwa iziguli ezinokugula okuncane noma okulinganiselayo. Ukukhubazeka kunikezwa uma kwenzeka kungenakwenzeka ukufeza imisebenzi yabo yokukhiqiza emsebenzini okhona, futhi ukudluliselwa ekusebenzeni lula kuzoholela ekulahlekelweni okukhulu kumholo.
Uhlu lwemikhawulo yokukhiqiza luchazwe ku-Order No. 302-n woMnyango Wezempilo waseRussia. Iqembu lesithathu libuye lifake neziguli ezisencane eziqeqeshwa. Iqembu lesibili lokukhubazeka lenziwa ngendlela enzima yesifo. Phakathi kwemigomo:
ukulimala okubuyayo kwe-2nd noma i-3 degree,
izimpawu zokuqala zokuhluleka kwezinso,
ukuhluleka kwe-realysis renal,
ama-neuropathies we-2nd degree,
encephalopathy kuya kuma-degree angu-3,
ukwephulwa kokunyakaza okufika ku-2 degrees,
ukwephulwa kokuzinakekela kuze kufike ku-2 degrees.
Leli qembu liphinde linikezwe abanesifo sikashukela ngokubonisa ngokulingana kwesifo, kodwa ngokungakwazi ukuzinza isimo ngokuselapha okujwayelekile. Umuntu ubonwa njengomuntu okhubazekile weqembu 1 ngokungakwazi ukuzinakekela. Lokhu kwenzeka uma kwenzeka umonakalo omkhulu kwezitho ezihlosiwe kushukela:
ubumpumputhe emehlweni womabili
ukuthuthukiswa kokukhubazeka kanye nokulahleka kokuhamba,
ukwephulwa okukhulu kwemisebenzi yengqondo,
ukuthuthukiswa kokuhluleka kwenhliziyo ama-degree angu-3,
unyawo lwesifo sikashukela noma i-gangrene yamaphethelo aphansi,
ukwehluleka kwezinso lokugcina,
izimo ezivamile zokukhohlisa kanye ne-hypoglycemic.
Ukwenza ukukhubazeka kwengane nge-ITU yezingane. Izingane ezinjalo zidinga imijovo ye-insulin ejwayelekile nokulawulwa kwe-glycemic. Umzali noma umnakekeli wengane uhlinzeka ngezinqubo zokunakekelwa nezokwelashwa. Iqembu lokukhubazeka kuleli cala linikezwa iminyaka eyi-14. Lapho ifika le minyaka, ingane iyahlolwa futhi.Kukholelwa ukuthi isiguli esinesifo sikashukela esivela eminyakeni eyi-14 ubudala singakwazi ukufaka injemele futhi silawule ushukela wegazi, ngakho-ke, asidingi ukubonwa umuntu omdala. Uma ukusebenza okunjalo kufakazelwe, ukukhubazeka kuyasuswa.
Imvamisa yokuhlolwa kabusha kweziguli
Ngemuva kokuhlolwa yi-ITU, isiguli sithola umbono wokwamukelwa komuntu okhubazekile noma ukwenqaba izincomo. Lapho enquma impesheni, umuntu onesifo sikashukela uyaziswa ukuthi kuthathwa isikhathi esingakanani ukuthi akanakuba namandla. Imvamisa, ukukhubazeka kokuqala kwamaqembu 2 noma 3 kusho ukuphinde kuhlolwe unyaka owodwa ngemuva kokubhaliswa kwesimo esisha.
Ukuqokwa kweqembu lokuqala lokukhubazeka kwisifo sikashukela kuhlotshaniswa nesidingo sokukuqinisekisa ngemuva kweminyaka eyi-2, lapho kunenkinga enkulu esigabeni esibulalayo, impesheni ingakhishwa masinyane. Lapho uhlola impesheni, ukukhubazeka kuvame ukukhishwa unomphela. Uma isimo siba sibi kakhulu (ngokwesibonelo, ukwanda kwe-encephalopathy, ukuthuthukiswa kokungaboni), udokotela ohambelayo angamdlulisa ukuthi ahlolwe kabusha ukuze andise iqembu.
Uhlelo lokuvuselela umuntu ngamunye kanye nohlelo lokuhlala
Kanye nesitifiketi sokukhubazeka, isiguli esinesifo sikashukela sithola uhlelo ngalunye ezandleni. Kuthuthukiswa ngesisekelo sezidingo zomuntu ngandlela-thile noma kolunye kosizo lwezempilo, losizo kwezenhlalo. Uhlelo lukhombisa:
Imvamisa enconywayo yokulaliswa esibhedlela okuhleliwe ngonyaka. Isikhungo sezempilo somphakathi lapho isiguli sibhekwa khona sinesibopho kulokhu. Ngokuthuthuka kokwehluleka kwezinso, kuboniswa izincomo zokuthi kudayilizwe i-dialysis.
Isidingo sokubhaliswa kwezindlela zobuchwepheshe nezenhlanzeko zokuvuselela kabusha. Lokhu kufaka zonke izikhundla ezinconyelwe amaphepha we-ITU.
Isidingo sokwelashwa okuphezulu, nge-quota (i-prosthetics, ukusebenza kwizitho zombono, izinso).
Iziphakamiso zosizo lwezezenhlalo nezomthetho.
Iziphakamiso zokuqeqeshwa kanye nohlobo lomsebenzi (uhlu lochwepheshe, uhlobo lokuqeqeshwa, izimo kanye nohlobo lomsebenzi).
Kubalulekile! Lapho kwenziwa imisebenzi enconyelwe isiguli, abakwa-IPRA bezokwelapha nezinye izinhlangano babeka uphawu ekuqalisweni kwesitembu sabo. Uma isiguli senqaba ukuvuselelwa: ukulaliswa esibhedlela okuhleliwe, kungayi kudokotela, kungathathi umuthi, kepha kugcizelela ukuqaphela umuntu onesifo sikashukela njengegama elingapheli noma ukukhulisa iqembu, i-ITU inganquma ukuthi impikiswano ayimhambeli kahle.
Iziguli ezinesifo sikashukela zisebenzisa imali eningi ekuthengeni kwazo izidakamizwa nezinsiza zokulawula i-glycemic (glucometer, lancets, strips test). Abantu abakhubazekile abagcini nje ngokuthola imishanguzo yezokwelashwa mahhala, kodwa futhi nethuba lokuthatha sengathi ukufaka iphampu ye-insulin njengengxenye yokuhlinzekwa kokunakekelwa kwezokwelapha okuphezulu ngenxa yomshuwalense wezokwelapha ophoqelelwe.
Izindlela zobuchwepheshe nezenhlanzeko zokuvuselela zenziwa ngazinye. Kufanele uzijwayeze nohlu lwezikhundla ezinconyiwe ngaphambi kokuhambisa imibhalo yokukhubazeka ehhovisi likachwepheshe wephrofayili. Ngaphezu kwalokho, isiguli sithola ukwesekwa: impesheni yokukhubazeka, ukunakekelwa okususelwa ekhaya ngusonhlalonhle, ukubhaliswa koxhaso ngemali ekhokhelwa izindleko, ukwelashwa kwe-spa kwamahhala.
Ukuxazulula inkinga yokuhlinzeka ngemithi yokwelashwa kwe-spa, kuyadingeka ukucacisa eSikhwameni Somshwalense Wezenhlalo sendawo ukuthi yimaphi amaqembu abantu abakhubazekile abanganikeza izimvume. Imvamisa, kudluliselwa mahhala kwi-sanatorium enikezwa amaqembu 2 no-3 wokukhubazeka. Iziguli ezineqembu 1 zidinga umlindi ongeke anikezwe ithikithi lamahhala.
Usizo ezinganeni ezikhubazekile nemindeni yabo lufaka:
ukukhokhelwa kwempesheni yomphakathi enganeni,
isinxephezelo kumnakekeli ophoqelelwa ukuba angasebenzi,
ukufakwa kwesikhathi sokusuka kokuhlangenwe nakho kokusebenza,
amathuba okukhetha isonto elifinyeziwe,
amathuba okuhamba mahhala ngezindlela ezahlukahlukene zokuhamba,
izinzuzo zentela engenayo
ukudala izimo zokufunda esikoleni, ukuphumelela ukuhlolwa kanye nokuhlolwa,
indawo yezindlu ezizimele, uma umndeni ubhekwa njengedinga izimo ezingcono zezindlu.
Ukubhaliswa kokukhubazeka okuyisisekelo kokuguga kuvame ukuhlotshaniswa nesifo sikashukela sohlobo 2. Iziguli ezinje ziyazibuza ukuthi zizonikezwa yini izinzuzo ezikhethekile. Izindlela eziyisisekelo zokusekelwa azihlukile kulezo ezineziguli ezinempilo ezitholile ezikhubazekile. Ngaphezu kwalokho, izinkokhelo ezingeziwe zenziwa kubahola impesheni, inani lazo ngokuya ngobude benkonzo kanye neqembu lokukhubazeka.
Futhi, umuntu osekhulile angaqhubeka akwazi ukusebenza, enelungelo losuku lokufinyezwa, ukuhlinzekwa kwekhefu lonyaka lezinsuku ezingama-30 nethuba lokuthatha ikhefu ngaphandle kokugcina izinyanga ezi-2. Ukubhaliswa kokukhubazeka kwesifo sikashukela kuyanconywa kubantu abanenkinga enzima yesifo, ukuntuleka kwesinxephezelo ngesikhathi sokwelashwa, uma kungenakwenzeka ukuqhubeka nokusebenza ngaphansi kwezimo zangaphambilini, kanye nasezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyi-14 ngenxa yesidingo sokulawula ukwelashwa. Abantu abakhubazekile bathola ithuba lokusebenzisa imihlomulo bese befaka izicelo zokwelashwa okuphezulu okubizayo.
Izinzuzo Zesifo Sikashukela
Uma kwenzeka uhlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela, iziguli zinikezwa i-insulin yamahhala, izindlela zokuphatha, imichilo yokuhlola ye-glucometer ngezinga lezingcezu ezi-3 ngosuku. Abanesifo sikashukela esitholakala sinesifo sikashukela sohlobo 2 banikezwa imishanguzo ngaphandle kwemali kahulumeni eyehlisa ushukela wegazi futhi abasohlwini lwemithi yamahhala.
Ngo-2017, iziguli zingathola i-glibenclamide, gliclazide, metformin ne-repaglinide ngaphandle kwenkokhelo. Bangaphinde banikezwe i-insulin (uma kunesidingo) nokulawulwa kwe-glycemic - imivimbo eyodwa yokuhlola uma isiguli sithatha amaphilisi, amathathu ngokushintsha okuphelele kwe-insulin.
Isinqumo sokuthi imuphi umuthi ozokhishwa senziwa yi-endocrinologist lapho uhlala khona. Ukuze ube nelungelo lokuthola izidakamizwa zamahhala njalo ngenyanga, udinga ukubhalisa emtholampilo wesifunda futhi unikeze isitifiketi esikhwameni sempesheni sokuthi isinxephezelo semali asikaze sitholwe esikhundleni ngezinzuzo zomphakathi.
Lapho usebenzisa izinzuzo zezenhlalo zemithi nokwelapha, le mithetho elandelayo kumele icatshangwe:
Imvamisa yokunquma iba kanye ngenyanga.
Ngaphambi kokuthola umuthi okhethekile, udinga ukuhlolwa.
Umuthi unikezwa kuphela isiguli ezingalweni zakhe.
Uma udokotela enqaba ukubhala incwadi yezidakamizwa noma imivimbo yokuhlolwa, udinga ukuxhumana nodokotela oyinhloko womtholampilo, uma lokhu kungalethanga umphumela obekulindelekile, bese uya esikhwameni (somnyango wesifunda) somshuwalense wezempilo ophoqelelwe.
Ngaphezu kokwelashwa kwamahhala nge-insulin noma amaphilisi ukwehlisa ushukela wegazi, iziguli ezinesifo sikashukela zingahlolwa futhi zilungiswe ekwelashweni okunqunyelwe esibhedlela noma esikhungweni sokuxilonga, futhi zithole izeluleko kudokotela ohlinzeka ngethambo, udokotela oyi-neurologist, udokotela wamehlo kanye nodokotela ohlinza imithambo.
Iziguli azikhokhi zonke lezi zifundo kanye nokubonisana.
Ukuzimisela kokukhubazeka kwabanesifo sikashukela
Ukuze ube nesimo somuntu okhubazekile futhi uthole imihlomulo ebekwe ngumthetho, udinga ukuya kukhomishini yezokwelapha neyenhlalo ukuze kuhlolwe ukukhubazeka. Lo mzimba ungaphansi kweNgqongqoshe Wezempilo kanye Nezokuthuthukiswa Komphakathi eRussia. Ukudluliselwa kokuhlolwa kufanele kutholakale kudokotela ozinakekela emtholampilo.
Ngaphambi kokuhlolwa, udinga ukuhlolwa okugcwele: ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile nokune-biochemical, ukuhlolwa komchamo ushukela, imizimba ye-ketone, ukuhlolwa okujwayelekile, ukuhlolwa komthwalo weglucose, i-glycated hemoglobin, i-ultrasound yezinso, imithambo yegazi, i-ECG nezinye izinhlobo zezifundo ezidingekayo ukuqinisekisa ukutholwa nodokotela izinkinga zesifo sikashukela.
Ukuqashwa nokuhlolwa kwangaphambi kokuhlola ushukela wegazi kanye nesibhedlela, kanye nesiphetho sabachwepheshe abanjalo, udokotela wezifo zamehlo, udokotela wezifo zamehlo, udokotela wezifo zenhliziyo, udokotela oyi-urologist noma udokotela wezifo zamazinyo ungadingeka.Isethi ngayinye yezifundo kanye nokubonisana kukhethiwe esigulini ngasinye.
Ngemuva kokudlula zonke izinqubo zokuxilonga, yonke imibhalo nokudluliselwa kokuhlolwa 088 / y-06 kunikezwa isiguli. Ngale phakethe lamadokhumenti udinga ukuxhumana nehhovisi lokuhlolwa kwezokwelapha nezenhlalo, lapho kuzobekwa usuku lokuhlolwa bese kunikezwa iqembu labakhubazekile.
Izindlela zokunquma iqembu lokuqala:
Uhlobo olunamandla lwe-retinopathy ngokulahleka ngokuphelele noma okucishe kuphele.
I-angiopathy enkulu yesifo sikashukela: i-gangrene, unyawo lwesifo sikashukela.
I-Cardiopathy ngokuhluleka kwenhliziyo ama-degree angu-3.
I-Nephropathy enokuhluleka kwe-re-end.
Encephalopathy enokuphazamiseka kwengqondo.
I-Neuropathy: Ukukhubazeka okuqhubekayo, i-ataxia.
Ngasikhathi sinye, iziguli azikwazi ukuzimela ngokuzimela futhi zizikhonze, zilinganiselwe ekukhulumisaneni nasekuqondeni esikhaleni, zincike ngokuphelele kosizo lwangaphandle.
Iqembu lesibili lingabekelwa i-mellitus yesifo sikashukela esibuhlungu: isigaba se-2 retinopathy, ukwehluleka kwezinhlungu kokugcina, uma i-dialysis ingasinxephezela noma kwenziwe ukufakelwa kwezinso okuphumelelayo. I-Neuropathy ezigulini ezinjalo iholela kuma-paresis we-2nd degree, i-encephalopathy iqhubeka nokuphazamiseka kwengqondo.
Ukukhubazeka kukhawulelwe, iziguli zingakwazi ukuzimela ngokuzimela, zizinakekele futhi ziziphathe ngokwelashwa, kepha zidinga usizo lwangaphandle ngezikhathi ezithile. Iqembu lesibili nalo libekelwe inkambo esezingeni eliphansi yesifo sikashukela, lapho kuba nezinguquko ezibucayi emazingeni e-glycemia kuthi ngokwengxenye kwenzeke ikoma.
Ukukhubazeka kweqembu le-3 kunikezwa ngesikhathi se-mellitus yesifo sikashukela esilinganiselwe ngokubonisa okulinganiselwe kokungasebenzi kahle kwezitho, okuholele ekuvinjelweni okungenzeka kokuzinakekela, umsebenzi wezisebenzi (isiguli asikwazi ukwenza umsebenzi waso owedlule, obangele ukwehla kweziqu noma umthamo womsebenzi).
Inkambo yalesi sifo ihlolwa njengokuthi ayisebenzi. Isiguli singasebenza, kepha ngaphansi kwezimo ezikhanyayo.
Kubantu abasha, iqembu lesithathu lisungulwa isikhathi sokuphinda ufundise, ukuqeqesha nokuthola umsebenzi omusha.
Impesheni yesifo sikashukela
Umthetho othi “On Provension Pension Providence in the Russian Federation” uchaza isigaba sabantu abanelungelo lokuthola impesheni yokukhubazeka. Lolu hlobo lwezinkokhelo zempesheni lubhekisele kwabangakafundanga (kwezenhlalo), ngakho-ke, akuxhomekile ekuphakameni noma kubudala. Umuntu ohola impesheni uthola imali ngokuya ngeqembu lokukhubazeka alinikezwe.
Inani umuntu okhubazekile azolithola liqukethe izingxenye ezimbili: ingxenye eyisisekelo nenkokhelo yemali eyodwa. Ubungako bempesheni busungulwa ngumthetho wobumbano, ziyefana kulo lonke elaseRussia Federation. Phansi, izinkokhelo zokukhubazeka kusuka kwizabelomali zakho (izibonelelo kanye nezengezo kumhlalaphansi) zingandiswa. Akunakwenzeka ukukhanga ngosayizi wempesheni.
Impesheni yesifo sikashukela inikezwa hhayi kuphela kulezi ziguli esefike eminyakeni yokuthatha umhlalaphansi. Isitifiketi sikhishwa kumuntu ohola impesheni ngokushesha ngemuva kokufika ebudaleni, athole iqembu lokukhubazeka, elashwa esibhedlela. Uma unesifo sikashukela, kungenzeka ukuthi uthathe umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi.
Inani lokukhokha ngo-2017 (impesheni yanyanga zonke kuma-ruble):
Ukukhubazeka kweqembu lokuqala: 10068.53
Iqembu lesibili: 5034.25.
Iqembu lesithathu: 4279.14.
Izingane ezikhubazekile: 12082.06.
Izimali ezihlangene ezihlanganisiwe kusukela ngoFebhuwari 1 zazilandelana: kweqembu lokuqala - 3538.52, elesibili - 2527.06, leqembu lesithathu - 2022.94, ezinganeni ezikhubazekile ezingama-ruble angama-2527.06 ngenyanga.
Ezinganeni, ukukhubazeka ngaphandle kwesabelo seqembu lesifo sikashukela kunikezwa kuze kube iminyaka eyi-14 uma kudingeka ukwelashwa kwe-insulin okuqhubekayo, ngemuva kokufika kulonyaka, ukukhubazeka kuyasuswa uma ikhomishini inquma ukuthi osemusha angakwazi ukuhambisa i-insulin ngokuzimele futhi abale isilinganiso sayo ngemuva kokuqeqeshwa.
Uma kuphakama ukungaboni ngaso linye lapho kuchazwa iqembu elikhubazekile, udinga ukucela isinqumo esibhalwe phansi lapho ungafaka khona isikhalazo ngezenzo zehhovisi lobuchwepheshe bezokwelapha nezenhlalo emnyangweni ophakathi, uMnyango Wezempilo, bhalela umshushisi noma uye enkantolo.
Mayelana nosayizi wempesheni nemithetho yokudlulisa i-MEA izotshela ividiyo ekulesi sihloko.
Nginesifo sikashukela sohlobo 2 - esingeyona insulin. Umngane weluleke ukwehlisa ushukela wegazi noDiabeNot. Ngayala nge-Intanethi. Waqala ukwamukela. Ngilandela ukudla okungadingekile, njalo ekuseni ngiqala ukuhamba amakhilomitha angama-2-3 ngezinyawo. Emavikini amabili edlule, ngibona ukwehla ushukela emamitha ekuseni ngaphambi kokudla kwasekuseni kusuka ngo-9,3 kuye ku-7.1, izolo kuye ku-6.1! Ngiyaqhubeka nenkambo yokuzivikela. Ngizobhala ohlwini lwempumelelo.
UMargarita Pavlovna, nami ngihleli e-Diabenot manje. I-SD 2. Ngempela anginaso isikhathi sokudla nokuhamba, kepha angizisebenzisi kabi amaswidi kanye nama-carbohydrate, ngicabanga ukuthi i-XE, kepha ngenxa yobudala, ushukela usuphezulu. Imiphumela ayiyinhle njengeyakho, kepha ushukela ongu-7.0 akaphumi isonto lonke. Yiliphi i-glucometer olinganisa ushukela ngalo? Uyakhombisa iplasma noma igazi lonke? Ngifuna ukuqhathanisa imiphumela ngokuthatha umuthi.
Ake ungitshele - Mina, impesheni, ngingathembela kunoma yiluphi uhlobo lwenzuzo? Njengoba ingekho imali eyanele yamaphilisi, futhi esibhedlela bakhipha i-insulin kuphela?
Ungakuthola kanjani futhi ukubhalise kahle ukukhubazeka kwesifo sikashukela
Isifo sikashukela i-mellitus yisifo esibucayi kakhulu, yize umuntu esanda ukwelashwa ngokushesha. Ingozi yalokhu kugula ibuyele eqinisweni lokuthi kuvame ukudala izinkinga eziyingozi futhi kuthinte nezitho ezibalulekile zomzimba womuntu. Ungakuthola kanjani ukukhubazeka kwesifo sikashukela, kanjani ukuthola ukukhubazeka kwesifo sikashukela, kufundwe esihlokweni.
Kungani umuntu enokukhubazeka kwesifo sikashukela?
Umuntu okutholakale ukuthi unakho lokhu, kukho konke impilo yakhe, kumele abambelele ngokuqinile ekudleni okukhethekile, kanye nohlobo oluthile, ngalo ngokuhlanganiswa kungalawula ngempumelelo izinga likashukela, futhi aligcine lisezingeni elamukelekayo. Imvamisa, isifo sikashukela senza isiguli sincike kwi-insulin, futhi ngenxa yalokho, umuntu onalesi sifo kufanele akwazi ukuthola umjovo ofanele ngesikhathi esithile. Ngokwemvelo, amaqiniso angenhla alithinta kabi kakhulu impilo, futhi futhi ayiphindaphinda. Kungakho, umbuzo wokuthi ungayithola kanjani ukukhubazeka kwesifo sikashukela awukhathazi iziguli kuphela, kodwa futhi nezihlobo zawo.
Umuntu otholakala ukuthi unesifo sikashukela i-mellitus kancane ulahlekelwa amandla okusebenza, uthambekele ezifweni eziningi, ngenxa yezinkinga lesi sifo esikhona emzimbeni. Esimweni lapho ukutholwa kwenziwa esemncane lapho umhlalaphansi usekude kakhulu, kufanele ucabange ukuthi ungazihlelela kanjani ukukhubazeka.
Izimo eziyisisekelo ukuthi ungakuthola kanjani ukukhubazeka kwesifo sikashukela?
Ukukhubazeka kungakhishwa ngokuya ngokutholakala kokukhishwa mayelana nokwelashwa, kanye nezitifiketi eziqinisekisa ukuba khona kwalesi sifo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukukhubazeka kuzobhaliswa kuphela uma umuntu ngenxa yalesi sifo ephelelwe yikho konke noma ingxenye yomthamo wakhe womsebenzi ngenxa yezinkinga zempilo eziphikelelayo.
Umthetho weRussian Federation ucacisa ngokusobala iqiniso lokuthi umuntu ophelelwe amandla okusebenza ngenxa yesifo sikashukela unelungelo lokukhubazeka. Ngokuya ngezinga lokungasebenzi kahle kwezitho zangaphakathi ezibangelwa isifo sikashukela noma izinkinga zalo, ikhomishini yezokwelapha ingabela iqembu lokuqala, lesibili noma lesithathu lokukhubazeka.Uma kwenzeka ukuthi i-mellitus yesifo sikashukela idinga ukusetshenziswa njalo kwemijovo ye-insulin, ukukhubazeka kunikezwa ngokungenamkhawulo, okuqeda isidingo sokuhlolwa kabusha kwesifo ngonyaka.
Ungabhalisa kanjani ukukhubazeka kwesifo sikashukela?
Isinyathelo sokuqala sendlela yokubhalisa ukukhubazeka kwesifo sikashukela ukuxhumana nodokotela wendawo, okufanele abhalele izinkomba zeziguli uchungechunge lwezivivinyo. Ngemuva kokuthi ukuhlolwa kwe-ECG sekuphothuliwe, kucutshungulwa, bese kuthunyelwa emlandweni wezokwelapha, kuzodingeka ukuthi kwenziwe ikhomishini yezokwelapha neyenhlalo.
Ngemuva kokuthola ukukhishwa okukhethekile kudokotela omkhulu womtholampilo oxhumana naye, kufanele uthintane nekhomishini yezokwelapha neyenhlalo yangakini. Ukuze wenze lokhu kuhlolwa, kufanele unikeze yonke imibhalo yezokwelapha ekhona, kanye nephasipoti. Isinyathelo sokugcina ukugcwalisa isicelo senhlolovo. Ngokusekelwe kumadokhumenti nolwazi onalo, amalungu ekhomishini azothatha isinqumo futhi azokwabela elinye lamaqembu abakhubazekile. Ezimweni lapho ikhomishini, noma odokotela bomtholampilo benqume ukuthi ecaleni lakho asikho isizathu sokufaka isicelo sokukhubazeka, kungenzeka ukuthi ubheke ezinkantolo ukuthola usizo, futhi ungacela nokuthi ucubungule udaba lwakho kukhomishani yezokwelapha neyenhlalo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kufanele ulwele amalungelo akho futhi usebenzise zonke izindlela ezikhona kulokhu, ngoba ukukhubazeka kudinga ukwesekwa kombuso.
Isifo sikashukela i-mellitus yisifo esibi kakhulu. Uma ungalawulwa kahle ushukela wegazi, kungasebenzi kahle izitho ezibalulekile, okuholela ekulahlekelweni okuyingxenye noma okuphelele kokusebenza komuntu. Ukuthola ukukhubazeka kudinga ukuxhumana nodokotela wendawo.
Izizathu zokubhalisa ukukhubazeka kwesifo sikashukela
Ukukhubazeka (ukukhubazeka) ngesifo sikashukela i-mellitus kungabhaliswa phambi kwezizathu ezinkulu. Ukusungula iqembu lokukhubazeka, isifo esisodwa asanele, kulokhu, kuphela ukuba khona kwezinkinga ezitholakele ngenkathi lesi sifo kuphoqelekile. Kubandakanya ukwephulwa kokusebenza kwesitho esithile noma lonke uhlelo lomzimba womuntu. Lesi simo sezempilo sesivele siveza ukuthi uhlobo lwesifo sikashukela esigulini alunakubaluleka okuncane. Ukwephulwa kokusebenza okujwayelekile kwesiguli yisizathu esikhulu sokukhalaza kwakhe ukubhaliswa kokukhubazeka.
Ngubani othola ukukhubazeka kwesifo sikashukela?
Ukunikezwa kokukhubazeka kwengane enesifo sikashukela i-mellitus (kuncike ku-insulin) kungenzeka kuphela uma ingakafiki eminyakeni yobuningi. Ngemuva kwalokho ukubhaliswa kokukhubazeka kwenzeka ngaphandle kokunikeza iqembu. Zonke ezinye iziguli zivame ukwabelwa zona, ziholwa ubunzima besifundo saleso sifo, uhlobo lwezinkinga kanye nezinga lokukhubazeka kwesiguli.
Iziguli ezinenkinga yesifo kuphela ezinelungelo lokukhipha ukukhubazeka (ukukhubazeka) kushukela:
Unyawo lwesifo sikashukela (esivame ukutholakala ezigulini ezinesifo sikashukela). Kwenzeka ngenxa yokuphazamiseka kokujikeleza kwamaphethelo aphansi, okuholela ekunikezelweni kanye necrosis, bese kuthi kamuva kuqunjwe unyawo noma ingxenye yalo.
Zonke izinhlobo zokukhubazeka okwenzeka lapho imicu yezinzwa ilimele futhi ukungasebenzi kahle kuphazamisekile.
Isistimu yomchamo engazinzile.
Ukulimazeka okubukwayo - kusuka ekunciphiseni kobunzima kuze kube ubumpumputhe.
Ungasifaka kanjani isicelo sokukhubazeka sikashukela kanye nohlu lwemibhalo?
Ukuthola ukuthi ungabhalisa kanjani kahle ukukhubazeka kwesifo sikashukela, okokuqala, funda uhlu lwemibhalo edingekayo, bese ulandela imiyalo engezansi.
susa emlandweni wakho wezokwelapha ngokuphela kokuhlolwa,
isitifiketi somshuwalense wempesheni,
Isinyathelo ngesinyathelo: indlela yokuthola ukukhubazeka kwesifo sikashukela
Okokuqala, ukuze ubhalise kahle ukukhubazeka kwesifo sikashukela, bonana nodokotela. Uma ukugula kwakho sekukude kakhulu, udokotela wakho obonayo uyakwazi lokhu, okusho ukuthi unawo wonke amamaki ekwelashweni okudluliselwe ekhadini. Isifo sikashukela iyindawo ephethwe ngabaphethwe yi-endocrinologists, kepha udokotela ojwayelekile wasekhaya kufanele abhalele umuntu oyisazi sakho ikhomishini yezokwelapha neyenhlalo.
Uzokwedluliselwa ekuhlolweni okujwayelekile, ukuhlolwa koshukela wegazi, umchamo (ngokuzivocavoca umzimba, ukungazivocavoci), i-ECG, ukuhlolwa kwezitho ezithintwe ushukela omningi.
Ukurejista kahle ukukhubazeka kwesifo sikashukela, ngemuva kokuhlolwa, iya ku-Therapist futhi. Udokotela uzoqopha imiphumela ekhadini, olwethulwe kamuva yikhomishini, futhi uzokhipha emlandweni wezokwelapha ngencazelo emfushane yalesi sifo kanye nezifundo zokwelashwa. Ngokuqondisa okusha. Ngokuqondisa okusha, kufanele uthole isikhathi sokubonana nodokotela oyinhloko, bese uqinisekisa ifomu ngezimpawu ezidingekayo ebhukwini.
Njengoba izivivinyo zisebenza kuphela izinsuku eziyi-14, ngalesi sikhathi kufanele ube nesikhathi sokuya kwikhomishini ukuze ugweme ukuphinda uvivinye.
Kwikhomishini ihlinzeka ngohlelo lokusebenza, ipasipoti, inqubomgomo yezokwelashwa, isitifiketi sempesheni, okudlulisela nokukhipha emlandweni wezokwelapha.
Ngemuva kokubukeza imiphumela yezivivinyo futhi ukhulume mathupha nawe, ikhomishini izonquma iqembu lokukhubazeka olinikezwe, futhi kuya ngesilinganiso sokulimala kwezitho kanye nezinga lokukhubazeka.
Sikhishwa nini isitifiketi sempesheni?
Umuntu onesifo sikashukela angalindela ukuthola isitifiketi sempesheni kuphela ngemuva kokuthola ukwelashwa okungafanele kokubeletha, uzobhekwa udokotela osezandleni zomuntu futhi uzothola iqembu lokukhubazeka. Ngaphandle kwamaphepha afanele, ayikho impesheni ezonikezwa.
Kuyaphawuleka ukuthi impesheni yesifo sikashukela ngeke inikezwe kuphela labo asebeneminyaka yobudala engama-55 noma engama-60. Isitifiketi sempesheni sikhishwa ngokushesha ngemuva kokuthi umuntu esefike eminyakeni yobudala, ethola iqembu labakhubazekile futhi athole ukwelashwa okufanele esibhedlela.
Kodwa-ke, ngalesi sifo, unelungelo lokuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi uma ungumsebenzi webhizinisi. Kulokhu, udinga ukwenza isikhathi sokuhlangana ne-endocrinologist futhi uyohlolwa nabanye ochwepheshe, ngamunye wabo ozoshiya amanothi akhe emlandweni wesifo sakho.
Isifo sikashukela: impesheni yokukhubazeka
Ngemuva kokuthola odokotela (udokotela ohlinzayo, i-endocrinologist, i-Therapist, i-ENT, i-oculist), udokotela ophoqelekile unesibopho sokubhala isiphetho sokuthi angaya kukhomishini yesazi yokwelashwa kabusha. Amalungu ale khomishini azothatha isinqumo sokuthi ngabe udinga iqembu labakhubazekile, uma kunjalo, yiliphi - Mina, II noma III.
Ngemuva kokuthola imibhalo eqinisekisa iqembu lakho lokukhubazeka, kufanele idluliselwe kwiziphathimandla ezifanele zokubala impesheni. Isikhwama sempesheni sibhekene nalokhu, esibeka usayizi wempesheni yabantu abakhubazekile kuwo wonke amaqembu ama-3.
Impesheni yesifo sikashukela ngeke ikhokhwe kulezi zimo ezilandelayo:
uma umuntu enqaba ukuhlolwa udokotela futhi elashwa,
uma ungabelwe noma yiliphi iqembu lama-3 abakhubazekile,
uma kwenzeka ungenaso isiphetho sokuthi uyaziwa ukuthi ukhubazekile.
KUBALULEKILE: Futhi, ungakhohlwa ukuthi, ngokwesisekelo sokukhubazeka, unelungelo lokuthatha umhlalaphansi emsebenzini ngaphambi kwesikhathi somthetho. Umbono ovela kukhomishini enkulu kufanele unikezwe iziphathimandla. Uma abaphathi benkampani bengafuni ukukuvumela ukuthi uthathe umhlalaphansi kungakabi isikhathi, unelungelo lokufaka enkantolo icala. Umthetho uvikela amalungelo abanesifo sikashukela kuleli cala, ngakho-ke ungesabi ukukhuluma nabaphathi bakho ucele amalungelo akho ahlonishwe.
Imibuzo yomuntu ngamunye ngezinqumo zebhodi yezokwelapha
Njengoba ubona, ngesifo sikashukela, impesheni yokukhubazeka iyadingeka, kepha kuthiwani uma wenqatshelwa iqembu lokukhubazeka? Izimo ezinjalo ziyenzeka futhi, ngakho-ke kufanele uzilungiselele ukuvikela amalungelo akho nalapha.
Ikomidi lochwepheshe kufanele likunikeze umbiko wezokwelapha ozoveza ukuthi kungani unganikwanga iqembu lokukhubazeka.
Uma ikhomishini yenqaba ukuchaza izizathu zokwenqaba kwayo, ungaya enkantolo. Icala lifakwa esikhungweni sezokwelapha lapho udlulise khona ikhomishini. Imvamisa izenzo ezinjalo ziletha umphumela omuhle, njengoba ochwepheshe kudingeka ukuba banikeze izincazelo uma behluleka.
Uma ungakatholi iqembu lokukhubazeka futhi unikezwe incazelo, kodwa ungavumelani nabo, ungasifaka isikhalazo lesi sinqumo. Isicelo sithunyelwa kuMnyango Wezempilo, bese ulandela imiyalo oyonikezwa yona kulokhu. Njengomthetho, kuqokwa ukuhlolwa kwesibili, ngemuva kwalokho isiphetho sekhomishini sizoqinisekiswa noma siphikiswe.
OKUBALULEKILE: Ubukhulu bempesheni yeziguli ezinesifo sikashukela busetwa nguhulumeni futhi akunakuphikiswa enkantolo. Ngeshwa, isimo esisemthethweni sabanesifo sikashukela ezweni lethu asembozwa kahle kwabezindaba, okuphakamisa imibuzo eminingi mayelana nempesheni, ukutholwa kwaso, usayizi, njll.
Iyini impesheni yesifo sikashukela sezingane?
Njengoba wazi, izingane ezinesifo sikashukela azilitholi iqembu lokukhubazeka, kepha zinelungelo lokuthola impesheni. Leli qembu leziguli libizwa ngezingane ezikhubazekile ngesifo sikashukela.
Umzali ongasebenzi osebenzela ingane ukhokhelwa impesheni yama-ruble ayi-5 500 (njengangonyaka). Ngaphezu kwalokho, kunikezwa izinzuzo ezikhethekile ezinganeni ezikhubazekile: amathikithi aya e-sanatorium, umuthi wamahhala, imali encishisiwe yokuhamba, njll.
Ngabe ufunani imali yempesheni yezingane ezinesifo sikashukela? Noma ingane yakho inezinzuzo ezithile futhi ithola imishanguzo yamahhala, imali eyengeziwe ngeke ilimaze, ngoba nayo ingachithwa ekwelapheni nasekuvimbeleni izifo eziyingozi ze-endocrine.
Okokuqala, izingane ezinokukhubazeka kwesifo sikashukela zidinga umsoco ofanele, futhi imikhiqizo namuhla iyabiza kakhulu. Okwesibili, konke okungenzeka kufanele kwenziwe ukwenza umfana noma intombazane ukuba izizwe njengezingane ezigcwele ngokugcwele - ibayise ohambweni olujabulisayo, vakashela iminyuziyamu, imibukiso, amapaki wezingane, njll.
Ukuhola impesheni yengane ene-mellitus yesifo sikashukela, yiqiniso, ngeke kubhekelele zonke izindleko zakho, kepha kuzoba usizo oluhle lwanyanga zonke, okufanelekile ukuthatha. Uma ngasizathu simbe ungayitholi le mali, futhi ingane yakho igula ngesifo sikashukela, udinga ukuxhumana nodokotela we-endocrinologist, khona-ke ikhomishini ekhethekile, futhi uma inkinga ingaxazululwa, kufanele ufake isicelo noMnyango Wezempilo. Njengomthetho, izindaba ezinjalo zixazululwa ngokushesha, futhi ingane ithola impesheni, enikezwe kulezi zimo.
Isifo sikashukela mellitus - lesi sifo asisona esibulalayo, kepha kunalokho siyingozi futhi siyingozi, sinamakha.
Isifo sikashukela yisifo esibi kakhulu se-endocrine esisifo ngokwengxenye yaso noma ngokuphelele.
Isifo sikashukela yisifo esiyingozi se-endocrine, esivame ukuholela ekuphulweni umthetho.
Ukubekwa kwezinto ezivela kusisetshenziswa ku-Intanethi kungenzeka ngesixhumanisi sangemuva ku-portal.
Ngabe Uhlobo Lempesheni Yesifo Sikashukela Lufanelekile?
Isifo sikashukela i-mellitus, uma sesivukile, sihambisana nomuntu impilo yakhe yonke. Ukuze ukwazi ukugcina impilo nokusebenza kahle, umsebenzi wezenhlalo, abanesifo sikashukela bahlala baphoqelelwa ukusebenzisa imithi kanye nezinto zokwelapha ukulawula lesi sifo.
Uma kwenzeka kunesifo sikashukela esincike ku-insulin 1, i-hormone kumele iphathwe okungenani izikhathi ezingama-4-5 ngosuku, ngenkathi ilawula izinga le-glycemia ngemichilo yokuhlolwa kwi-glucometer.Konke lokhu kunezindleko ezinkulu, ngakho-ke, isiguli ngasinye sinesifiso sokuthi impesheni ibekelwe ushukela kanye nokuthi yiziphi izinzuzo ezingasetshenziswa ukunciphisa izindleko zokwelashwa.
Ngasikhathi sinye, ukunquma ukuthi lesi sifo sitholakalanga kanjani ukuthi sikwazi ukusebenzisa izinzuzo, ngoba udinga ukuhamba ngezigaba eziningana ukuthola isimo somzuzi kwisifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, kunezindlela eziningi lapho isiguli sithola ukukhubazeka futhi sikhokhelwa impesheni efanele.
Isifo sikashukela kanye nesimo: imihlomulo, izimpesheni, uxhaso
Sanibonani bafundi abathandekayo! Sizokhuluma namhlanje ngesihloko esibucayi, okungukuthi, ngosizo oluvela esimweni seziguli zaseRussia ezinesifo sikashukela. I-athikili izoba wusizo kuzo zonke izinhlobo zesifo sikashukela.
Futhi ekugcineni kwendatshana ngifuna ukwethula kini ukuxhumana kwami ​​neziguli zami eziqhamuka eCanada ekude, owatshela ngomusa ukuthi izingane nabazali bazo abanesifo sikashukela ezweni labo baphila kanjani.
Ukuxhaswa kukahulumeni kwabantu abanesifo sikashukela
Inzuzo, imixhaso kanye nezimpesheni zikhokhiswa ngokuhlukile ezinganeni nakubantu abadala. Okokuqala, ake sixoxe ngezingane njengekusasa lesizwe kanye nabantu baseRussia bebonke. Kuyiqiniso, wonke umthwalo ulele kubazali noma kubantu bekhulisa izingane ezinesifo sikashukela. Singasho ukuthi kwakhiwa i-tandem ethile lapho indima ehola idlalwa ngumuntu omdala. Futhi imithwalo yakhe yemfanelo ifaka ukuhlinzeka le ndoda encane yonke into edingekayo, kanye nokufundisa impilo ngale kugula. Uyacelwa ukuthi uqaphele, angishongo lutho mayelana nombuso, izinsizakalo zenhlalo noma ngodokotela.
Konke okungenhla kufeza indima yesibili, basiza noma baphazamise (lokhu futhi kungaba uhlelo lukaNkulunkulu). Akuyena udokotela obhekene nolwazi lwakho ngesifo sikashukela, umbuso akufanele unikeze konke okuhle, hhayi ukuthi izinsizakalo zenhlalo kufanele zikhokhele futhi zisekele ingane enjalo. Wena kuphela okufanele ukwenze konke lokhu, kufaka phakathi ubuhlakani, ubuhlakani kanye nokusebenza kahle, ukuze uphume ezimweni ezinzima zempilo. Maye, lokhu kunjalo, noma ungathanda ukuzithethelela kanjani.
Ngakho-ke, zonke izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-18 ezinesifo sikashukela ezinesifo sikashukela zinethuba lokubhaliswa kokukhubazeka, noma ngabe ziyini imbangela yesifo sikashukela sabantwana. Isigaba lesi sizobizwa ngokuthi - ukukhubazeka kwengane. Leli lungelo lanikezwa bona ngokomyalelo woMnyango Wezempilo waseRussia Federation Nombolo 117 wango-4.07.91 "Inqubo yokubona ingane njengomuntu okhubazekile". Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi esikhathini esizayo esiseduze iminyaka yokwamukelwa njengomuntu okhubazekile izoncishiswa ibe yiminyaka eyi-14.
Akudingeki ukhathazeke kakhulu, ngoba ukuhlinzekela okhethekile ngemithi kanye nemichilo yokuhlola kuzohlala, kuzosala izinzuzo zomphakathi nempesheni kuphela, njengoba kusoshukela wabantu abadala ngaphandle kwezinga lokukhubazeka. Kuyadabukisa ukuthi yini okufanele ukwenze.
Abantu abanesifo sikashukela lapho sebekhulile abayitholi ngokushesha ukukhubazeka, ngoba ekuqaleni umuntu akancishwa amandla okusebenza futhi angasebenza ngokujwayelekile. Ukuhlinzekela okhethwayo ngendlela yemithi nangezinye izindlela kwenziwa ngokuxhashazwa kwezinsiza zesifunda, ngamanye amazwi, ngokuchithwa kwemali yesifunda ahlala kuso. Ngokucebisa isifunda, kuba ngcono ukuphepha, njengomthetho. Ukukhubazeka ngesifo sikashukela kunzima kakhulu ukukuthola, ngoba ukukhubazeka kungaqhubeka isikhathi eside, futhi uma umuntu esebenza yedwa futhi elawula isifo sikashukela, khona-ke ukukhubazeka kungenzeka kungabi nakancane.
Umklamo wokukhubazeka kubantu abadala ungaba khona lapho kunezinkinga ezinzima zesifo sikashukela, njenge-nephropathy ene-proteinuria kanye nokwehluleka kwe-renal noma ukunqunywa kweminwe nemilenze. Ngabe udinga ukukhubazeka okunje? Impela, ngokubuka kwezezimali, ukuba nokukhubazeka kusiza kakhulu, ngoba ziningi izinzuzo, uxhaso, kanye nempesheni. Kwimikhuba yami, ngihlangane nabantu ababefuna ngokuqondile ukuthola iqembu lokukhubazeka ngaphandle kobufakazi, futhi bonke ngenxa yalama buns. Ngiyavuma ukuthi kaningi lokhu akwenziwa kusuka empilweni enhle. Imindeni eminingi yonke ihlala impesheni yokukhubazeka yesihlobo futhi kuyishwa kakhulu lapho izingane ezindala ezinempilo zihlala ekhaya zilinde omama bazo, obaba noma obabamkhulu ukuba bathathe umhlalaphansi, esikhundleni sokuya emsebenzini.Kepha lolu uhlangothi oluyisimilo nokuziphatha, esingeke siluthinte.
Imithi kanye nesifo sikashukela
Ngizokutshela ngemithi. Ezweni lethu, bonke abantu abane-mellitus yesifo sikashukela abahlonziwe banelungelo lokuthola ukwelashwa kwamahhala, okungukuthi, ukwelashwa okungekuhle kanye nokutholwa kwemithi yamahhala ngokuya ngezindlela zokupheka ezikhethekile. Abazali bami babevame ukungifundisa ebuntwaneni ukuthi ushizi wamahhala usegundwini le-mouse kuphela. Ngikukhumbule kahle lokhu ngempilo futhi manje ngihlala ngithuswa izipesheli ezinikezwa mahhala, kuhlala kukhona uhlobo oluthile lokubamba. Kunjalo nangomuthi.
Akunakwenzeka ukuthi uthole umuthi omuhle kakhulu mahhala, vele, uma unenhlanhla enkulu. Ngokuyisisekelo, izidakamizwa ezisebangeni eliphakathi ziyathengwa ezinokusebenza okuphansi, kanye nemiphumela emibi ebizwayo. Ezinganeni, izinto zingcono kakhulu. Izingane zinikezwa ikakhulukazi nge-insulin enophawu, ngoba ukuhlinzekwa kwenzeka ezingeni lombuso, kuyilapho izifunda zingathenga noma yini i-insulin eziyifunayo.
Kuze kube muva nje, odokotela bebengabeka izidakamizwa ngokusho kwe-INN, isb., Igama elijwayelekile. Kulo nyaka, lo mkhawulo ususiwe futhi odokotela banelungelo lokunquma amagama okuhweba. Bangakubhala, kepha lo muthi uzoba ekhemisi? Ngaphezu kwalokho, khumbula ukuthi inqubomgomo yokungenisa amanye amazwe iyaqhubeka, futhi ekhemisi sisemuva kweminyaka eminingi emuva kweYurophu nase-USA futhi akunakwenzeka ukuthi sibambe. Ngibe senginikeza uhla lwalokho umuntu onesifo sikashukela ezweni lethu angakulindela kuhulumeni, bese ngishicilela izincwadi nabahlali baseCanada mayelana nokuxhaswa ezweni labo.
Izinzuzo, izinkokhelo kanye nezinzuzo zezingane ezinesifo sikashukela nabazali bazo
impesheni yezenhlalo kanye nezimalini zenani lama-51 p ngokuya nge-Art. I-18 yoMthetho Wezimali kaDisemba 15, 2001 No. 166-ФЗ "On Provension Pension Providence in Russian Federation" (imininingwane ka-2016)
ukukhokhelwa kwesinxephezelo kumzali osemthethweni ongasebenzi noma umnakekeli onakekela ingane ekhubazekile ngenani (bheka iSinqumo soMongameli Wezwe laseRussia ngoFebhuwari 26, 2013 N 175)
Inzuzo yokuthatha umhlalaphansi inikezwa umzali noma umnakekeli ngokuzayo (isikhathi sokunakekela ingane ekhubazekile sibalwa njengendala futhi umama wengane ekhubazekile unelungelo lokuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi uma esekhulele eminyakeni eyi-8 enolwazi lomshuwalense weminyaka engu-15).
Ngokuya eqenjini labakhubazekile elisunguliwe, ngokuya nge-Federal Law "On the Social Protection of Persons in Disvers in the Russian Federation", i-EDV isungulwe, usayizi wayo ngo-2015 ungowezingane ezikhubazekile, 59 p.
Ilungelo lokuphathwa mahhala kwe-spa lonyaka alinikezwa kuphela kumntwana, kodwa futhi nakumzali oyedwa noma umnakekeli ohambisana naye.
Ngokwengxenye yesibili yekhodi yentela yeRussian Federation (i-Article 218), abazali bezingane abakhubazekile abaneminyaka engaphansi kwengu-18 ubudala, futhi esimweni sokufunda ngokugcwele ngokugcwele esikhungweni sezemfundo esinamaqembu ayi-1 noma amabili afinyelela eminyakeni engama-24 ubudala, kususwa intela ejwayelekile yobukhulu.
Kunokusizakala okuningi ngaphansi komthetho wezabasebenzi, izinzuzo zezindlu nezokuhamba.
Ezinganeni ezikhubazekile, kunamalungelo okufunda.
ukubekwa phambili kwezingane ezikhubazekile ezikhungweni zemfundo zasenkulisa (Isinqumo Somongameli Wezwe laseRussia ngo-Okthoba 2, 1992),
ukuxolelwa ezikhokhisweni zokunakekelwa kwabantwana kubazali abanezingane okuthi, ngokwezikhungo zezokwelapha, kutholakale ukuthi zinokushoda ekuthuthukisweni ngokomzimba noma ngokwengqondo (Isixazululo soMkhandlu Ophakeme waseRussia Federation Nombolo 6 kaMashi 6, 1992)
Izinzuzo, izinkokhelo kanye nezinzuzo zabantu abadala abanesifo sikashukela esikhubazekile
Impesheni yokukhubazeka komphakathi ngokuya ngeqembu kusukela ngonyaka we-2016 (uma kukhona abantu abazoncika, inani liba likhulu ngokuya ngenani lababondlayo)
Iqembu eli-1, 73 r
Iqembu 2, 85 r
Iqembu le-3, i-90 r
Imali ekhokhwa imali yanyanga zonke (i-UIA) isethwe ngokuya ngeqembu
Iqembu eli-1, 23 r
Iqembu 2, 59 r
Iqembu 3, 30 r
I-Federal supplement yezenhlalo yabasebenza impesheni engasebenzisi omholo wabo ongaphansi kwezinga lokudla
Abaqaphi nabanakekeli abadala abakhubazekile banamathelane nenkokhelo yesinxephezelo yanyanga zonke ngokuya ngePresident Isinqumo sangoDisemba 26, 2006 No. 1455
Umuntu ohambisana nomuntu okhubazekile weqembu 1 unikezwa ithikithi nokuhamba ngezimo ezifanayo. Abasebenzi abakhubazekile banikezwa isaphulelo esingu-50%. Ukungasebenzisi MAHHALA (ithikithi + lokuhamba)
Iqoqo lezinsizakalo zenhlalo, ezibandakanya umuthi wemahhala, ukwelashwa kwe-spa sohlobo 2 sikashukela nokuhamba mahhala. Inani lilonke yi-995.23 k. Uma wenqaba iphakethe lezinsizakalo zenhlalo. izinsiza, uthola le mali, kepha ulahlekelwe yikho konke okunye. Ngakho-ke, ngaphambi kokunikela, kufanele ucabange ngokunikezwa kwezidakamizwa. Uma umuthi wakho ubiza kakhulu, ngakho-ke kunengqondo ukwala izinsiza zomphakathi. akukho phakeji.
Abantu abakhubazekile bamaqembu 1 no-2 bathola izinzuzo zemfundo (ukubhaliswa ngaphandle kokuhlolwa kanye nezifundo)
Izinzuzo zezindlu kanye nezabasebenzi
Ukuqhekelwa kwentela nokudonswa
Ukusekelwa kukahulumeni kuHulumeni waseCanada wezingane ezinesifo sikashukela sohlobo 1
Njengoba ngithembisile, ngishicilela izincwadi nonina wesinye seziguli zami eziseCanada. Ngisebenze izinyanga eziningana nomama u-Olga nendodakazi yami iminyaka engu-15 ukunxephezela ushukela wabo. Futhi u-Olga wavuma ngomusa ukusho ukuthi bakuhlela kanjani ukunakekelwa kwezokwelapha ezinganeni ezinjalo. Ngicaphuna ngaphandle kwezilungiso. Sicela uqaphele lolo lwazi lokuqala.
Umuthi lapha umshuwalense, uqukethe isimo sangasese. Wonke umuntu osebenzayo uvame ukuba nomshuwalense wangasese. Ngubani ongasebenzi - umbuso kuphela. Kepha ukufinyelela ekunakekelweni kwezokwelapha okudingekayo nemithi konke kucishe kufane (okuhlukile kungumbala wamazinyo nezinsizakalo ezahlukahlukene ezinjenge-massage Therapist, njll.). Kunzima ukuchaza ngezinombolo, ngoba konke kuncike emholweni womndeni nakwezinye izimo ezahlukahlukene. Asisebenzisanga lutho kuze kube icala noSofia.
Ngemuva kwalokho bashayisana ngokugcwele. Ukuphela kwento ehlala ikhokhelwa ucingo lwe-ambulensi (luhlala lukhona, lokhu alunikwa yinoma yimuphi umshuwalense). Kwenye indawo $ + mileage. Konke okunye kusembozwe ngokuphelele. Ubekade ekhubazekile ekunakekelweni kanzima. Yonke imishanguzo, imishini yakamuva, umhlengikazi uqobo, ibutho lodokotela abehlukene, izimo zabazali okufanele balale ubusuku lapho, njll. Lokhu futhi akubangelwa ukutholakala komshuwalense wangasese, lokhu kujwayelekile.
Kuliqiniso, lapho icala linzima. Uma kungekho nzima kakhulu, khona-ke, njengoba sitshelwe, akekho ojabulayo: ungalinda isikhathi eside ukuqokelwa udokotela, ngisho ne-ambulensi, ungaya kudokotela ukuze uthole ukukhishwa futhi ngemuva kwengxenye yonyaka, njll. Kwakungekho okuhlangenwe nakho komuntu siqu, kepha lokho obhekane nakho bekuyimibuzo cha, konke kwenziwa ezingeni eliphezulu kakhulu. Ngakho-ke, lapho umuntu ethi umuthi eCanada mubi, siyaphendula: unenhlanhla yokuthi awuzange uhlangabezane nomuthi omuhle, ngakho-ke akukubi kangako kuwe.
Imithi imbozwe ama-80%. Futhi akuxhomekile ekutholakaleni komshuwalense wangasese. Mhlawumbe umuntu othile kanye ne-100% (mhlawumbe abampofu), angazi. Ukuphela kwento esihlaselwe ngumshuwalense wangasese uhlobo lwe-insulin. Odokotela bathi iHP neLantus zingcono. Angazi, mhlawumbe kunjalo. Ama-glucmeter, ama-syringes mahhala. Imichilo ye-glucometer, izinaliti, i-insulin - ngaphandle kwemikhawulo.
Khumbula udaba lwethu ngohlelo lokuqapha? Ngakho-ke asizange silinde ukuthi kunikezwe udokotela udokotela. Kuthengwe futhi kuthunyelwe nje kwi-akhawunti yomshuwalense. Ibuyise i-100% ngaphandle kencwadi ebhaliwe. Bazibekela ngokuphelele izinto ezidliwayo, futhi uhlelo ngokwalo ngamadola ayi-1500 isikhathi sonke. Okusho ukuthi, uma siguqula uhlelo lolu lube olusha, sizobuyisa ingxenye esele kuphela kusuka kumadola ayi-1500, kepha konke okudliwayo kukhokhwe ngokugcwele. Into kuphela ukuthi, uma ikhemisi lithatha ngokushesha ama-80% ezindleko, khona-ke lapha siqala ukuthenga, bese sithumela i-invoice kumshuwalense, badlulisela imali.
Manje sekunohlelo lokuhlinzeka ngepompo likahulumeni. Angazi imininingwane, ngoba asihlelanga, kodwa umsebenzi ochazayo ugcwele.
Ukuxhaswa kombuso kuwo wonke amazinga. Isibhedlela sabikela isikole ngokushesha, sacebisa uthisha ophethe ukuthi yini nokuthi kanjani.Futhi, abahlengikazi bathumele imibhalo edingekayo yokuthola usizo njengengane ekhubazekile (pah-pah-pah, intombazane enhle kangaka ehlakaniphile!). Usizo lincike emholweni womndeni, kithi, kumadola ngenyanga. Ezibhedlela kunososayensi bezengqondo abahlukene, abondli, njll. Njalo ezinyangeni ezi-3 kuba nokuvakasha okuhleliwe kudokotela ngovivinyo. Kanye ngonyaka - ukuhlolwa okujulile. Abahlengikazi abaxhumana njalo ngosuku lwebhizinisi. Uma kwenzeka kunesimo esiphuthumayo - udadewethu osewashi. Kepha, njengoba usuvele uqonde kithi, empeleni kunzima kakhulu ukusungula inqubo ejwayelekile ngisho nazo zonke izinto ezidingekayo. Ngoba labo abangahlali nalokhu bamane nje abazi ama-nuances abaluleke kakhulu eqinisweni. Kepha wonke umuntu unikezwe futhi ubonga kakhulu ngalokho. Abanye - bakopisha, Ngiyabonga uNkulunkulu ngosizo lwakho.
Isimo somphakathi ... kahle, angazi, akukho ukukhetha. Nokho, lokhu akubhekwa njengesifo. Mhlawumbe faka kungekudala. Futhi lokhu bekuphindwa kaningi ukuthi awuguli, awukhubazekile. Ayikho imikhawulo eyahlangatshezwa noma kuphi.
Ngokuqondene nesifo sikashukela 2, ngonyaka we-2009 ubaba wami wahlala nathi izinyanga ezi-6. Wayenesifo sikashukela esincike ku-insulin 2. Samthatha umshwalense lapho ehlala. Futhi kwakukhona icala elinjengalesi. Ingcindezi yanda kakhulu, saya naye kudokotela. Ubuza ukuthi ulinganisa ushukela ongakanani. Uthi, angazi, angijwayele ukukala, imivimbo ebizayo. Ngaleso sikhathi, bengingazi ukuthi kufanele ngilinganise futhi nokuthi ngilinganisa kangaki.
Ungitshela ukuthi uzobhalela i-glucometer egameni lami nemivimbo ngakho, ukuze ngikwazi ukutholela umshuwalense ubaba wami. Ngiyamangala, ngithi, ngiyaphila, ungakubhala ngasiphi isizathu. Uthi ngoba Uma ubaba enesifo sikashukela, khona-ke nginawo wonke amalungelo okuba nakho konke lokhu okufanele ngikulawule. Njengoba ngikuqonda, noma ngubani angakwenza lokhu futhi alawule isimo, lokhu kuyinto ejwayelekile lapha. Yikho nje ukuthi abantu bavame, kuze kudlule ukuduma, akuphumi. Yilokhu engihlangabezana nakho. Ngingasho lutho ngaphezulu ngabantu abanesifo sikashukela 2 nezimpilo zabo.
Mhlawumbe uphuthelwe okunye? Buza. Ekuxhumeni!
D.L. Ngiyabonga. Olga ngomunye umbuzo. Ngabe izingane ezinesifo sikashukela zithola isimo sokukhubazeka - ebuntwaneni? nokuthi ungaqhubeka yini nezinqubo zokuqinisekisa unyaka nonyaka. SineKhomishini enjalo ye-ITU (ubuchwepheshe bezokwelapha nezenhlalo). Ngakho-ke, izingane ezinesifo sikashukela kufanele zingene kule khomishini minyaka yonke ukuze zithole izibonelelo nemithi. Ngaphambi kwalokhu, ukuhlolwa okuphoqelekile esibhedlela izinsuku ezingama-7-10 futhi namanje basaya kochwepheshe abancanyana bomtholampilo kanye nezivivinyo zokudlula. Ngokuvamile, le yindaba ephelele ne-tin. Ingabe unayo? Futhi ingabe impesheni ikhokhelwa enganeni njengomuntu okhubazekile noma kumama kuphela ukuze inakekelwe?
U-Olga: Sawubona, Dilyara! Sibe nomlando wethu isikhathi esingaphezu kweminyaka emi-2, asizange siqhubeke nezinqubo zokuqinisekisa. Ekuqaleni, umhlengikazi wagcwalisa wonke amadokhumenti, sawasayina futhi yilokho kuphela. Mhlawumbe nabo bathumela okuthile njalo ngonyaka - angazi, asenzi ukunyakaza komzimba ngale ndlela.
Imali manje, ngize ngibe neminyaka eyi-18, ngiyithola. Okuzokwenzeka emuva kwesikhathi - angazi. Usizo luhlala lunikezwa izingane, kepha kithi, enye futhi njengengane ekhubazekile. Lolu sizo (njengokubuyiselwa kwemali yentela) luxhomeke emalini engenayo yomndeni futhi luphinda lubuye njalo ngonyaka wentela. Futhi ngezwa ngokuqinisekiswa kokukhubazeka e-Ukraine. Qedela ubuhlanya! Ngiyethemba impela ukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi uhlelo luzokwenza umuntu ngokwakhe ...
Ekuxhumeni! Buza uma kunjalo.
D.L. Ngabe uthola izinkokhelo kuze kube yiminyaka eyi-18 kunoma iyiphi indlela ingane enempilo noma egulayo?
U-Olga: Yebo, sikhokha zonke izingane. Lokhu kulingana nohlelo lokubuyiselwa kwentela: bonke abasebenzi bakhokha izintela (ingxenye yesithathu yentela ivela kumholo womyeni). Futhi-ke, ngokuya ngenzuzo yonyaka yomndeni, kukhona ukubuyela kulabo abakudingayo, kufaka phakathi imindeni enezingane, futhi-ke, uma ingane idinga ukunakwa okwengeziwe, njengakithi ngendodakazi (noma uma umndeni awunazo izingane futhi womabili usebenza futhi ngemali enhle, bese besakwazi ukukhokha izintela). Kepha lokhu akusebenzi emindenini esebenzayo.
Lapho sifika, asisebenzi unyaka, safunda.Kepha kusukela ngosuku lokuqala sathola imali yezingane, futhi kakhulu kangangokuba saba nemali eyanele ukukhokhela ukuqasha indawo yokuhlala. Futhi asizange sitshale imali kubhajethi yezwe. Futhi uma kwenzeka okuthile, sizothola usizo ngenani elifanayo nezinye izakhamizi. Kwakumnandi ukuthi izingane zethu azidingwa thina kuphela, kodwa futhi nezwe.
Dilyara, ngifisa kakhulu wena indlela elula yokuthola lesi simo. Vumela ithuba lokuthi ubhekane nakho konke lokhu uthule, ngaphandle kwezici zangaphandle. "Hai bude dobe!", Njengoba besho e-Ukraine - "Akube kuhle!", Akunandaba.
Yebo, kunjalo! Ngiyethemba ukuthi le ndatshana ibithakazelisa futhi inolwazi kuwe. Futhi nokho ngiyakholelwa ekutheni ezweni lethu konke akukubi kangako! Ngithanda ukuzwa umbono wakho ngalolu daba. Futhi yabelana nge-athikili nabangane bakho nabantu obaziyo abanenkinga efanayo ngokusebenzisa izinkinobho zokuxhumana nomphakathi ezitholakala ngezansi, ngiyaqiniseka ukuthi nabo bazoba nentshisekelo.
Ngokufudumala nokunakekelwa, i-endocrinologist uDilara Lebedeva
ukwethuka. Bengingalindele ukuthi kube nokukhubazeka okunye. Ngagijimela kulokhu. DIE SLOWLY.
Thayipha isifo sikashukela sohlobo 2 ngiyagula ngineminyaka engama-20 okokugcina, njengoba kushiwo ngudokotela, ngasebenzisa amaphilisi we-Novo-mix insulin kanye ne-diamerid .. Ngo-Agasti, i-diamerid yasuswa kulokho eyayikukhethile futhi zombili izihlubuko zathathelwa indawo ngamathebulethi we-glidiab MB. Futhi ukuhlukunyezwa kwami ​​kwaqala. 1- ukuqunjelwa, kubuhlungu, uhhafu wosuku ethoyilethi. Ngawenqaba la maphilisi, ngathenga i-diamerid futhi ngacela udokotela ukuthi angidlulisele esikhungweni sikashukela. Izolo nje, bengiphakathi enkabeni, kwavela ukuthi amaphilisi kanye ne-diamerid ne-glidiab ne-insulin Novomix akuhambelani. Ngaphezu kwalokho, udokotela wabheka imilenze yami - kuvela ukuthi sengivele nginokuphazamiseka kwengqondo konyawo lwakho. Nganquma ukwelashwa, namuhla ngiyoya kudokotela ohlinzayo we-vascular, bese ngaya kudokotela we-endocrinologist uma ngifika lapho. Akufanele yini udokotela we-endocrinologist azi ukuthi ukuhambelana kwezidakamizwa kuyini? Kuzokwenzekani ngokulandelayo - Ngizobhala.
Ungumuntu onomusa kakhulu futhi le ndatshana ikuqinisekisa lokhu. Ngifisela wena umkhuba omuhle we-endocrinologist.
Ngibonga kakhulu, Dilyara, ngombhalo onolwazi! Konke makube kuhle)))
Dilyara! Ngiyabonga ngalesi sihloko.
Dilar othandekayo, sawubona! Ngiyabonga nge-athikili! Ake ungitshele, ingabe ukukhubazeka kuyasungulwa ezinganeni ezinesifo sikashukela esi-mody 2? Iminyaka yezingane: iminyaka eyi-10 nengu-1.5.
U-Olga, ngeshwa angikwazi ukuphendula lo mbuzo ngokunembile. Awekho amacala alolu hlobo lwesifo sikashukela edolobheni lethu noma atholakala nje ukuthi akanasifo. Kufanele uthinte abakwa-endocrinologists besikhungo sethu sase-Russian endocrinology eMoscow.
Ngiyabonga ngempendulo! Ngo-Okthoba-Novemba, sizokuya lapho. Ngemuva kwalokho ngizobhalisela ukubhala.
Ngiyabonga Dilyara? EMoscow nokuphazamiseka kwe-insulin nokuphindaphindwa, ukufaka amagama njalo, kuzokufanela, kepha akuhambelani njalo. Azikho izinalithi ezinyangeni ezi-2 .... Metformin ....... Imivimbo ... Futhi babika ngenjabulo - kuzoba kubi kakhulu ... ..
Maya, ngandlela thile ubhala amanga ngeMoscow. Kuhlala kukhona iMetformin, futhi ngisho noSiofor, bakhipha imivimbo njalo, ngenyanga edlule baze bayinika uVan Touch Ultra, yize bethi bazoba kuma-satellites kuphela. Angazi ngenaliti.
Lapha, ngisho naseMoscow, izimo ezahlukahlukene, ngokusobala okuningi kusencike esibhedlela.
Ngiyabonga ngendatshana ewusizo. Nawa amanani owilethile, ukuthi akukho lutho olufana nokwami ​​(ngikhubazekile amagremu ama-2) nesinye isicelo esihle, ungangisiza ngithole umuthi wokuthi i-Roglit yi-hypoglycemic futhi ulibeka kanjani? Ingabe kufanelekile ukuphuza?
Ungangisiza ngithole iRoglit?
Ingabe unazo iziphakamiso?
Lesi sidakamizwa besihlazo isikhathi esithile, manje sesenziwe kabusha. Indlela yokusebenza isebenza ngenhloso yokunciphisa ukumelana ne-insulin, njenge-metformin. Noma kunjalo, i-metformin isebenza ngempumelelo engaphezulu. Ngabe kuyasiza noma cha, udinga ukunquma kanye nodokotela okuhola.
Ngibonga kakhulu ngalo mbhalo, bekujabulisa kakhulu ukuthola ukuthi bahlobana kanjani “lapho” nabanesifo sikashukela.
Ngokuqondene neqiniso lokuthi "asisibi kangako" - ngizoyixoxa indaba yami. Ngihlala eMoscow, ngokulandelana, kwesinye isikhathi ngivakashela udokotela osekliniki emtholampilo. Ngaphezu kweminyaka emithathu, sishintshe odokotela abangu-8.Isici sabo esikhulu ukuthi babhala okuningi, ngokwesibonelo, "isisu sithambile, asibuhlungu", ngenkathi bengangibheki. Futhi abakaze babuze ngengcindezi, babhala abayi-140 kuye kwangama-90. Ngabuza ukuthi kungani, bayibhala - kufanele, bayaphendula. Ngabe kukhona izikhalazo? - Ngiyifaka ohlwini. - Yebo, ufunani ushukela wakho ... Futhi angifuni nokukhuluma ngemichilo yamahhala nemithi ... Ukuyibhala, udinga ukwenza isikhathi sokubonisana nodokotela, naphezu kwerekhodi nesikhathi esivezwe kwisigqebhezana sokuya kuye, ngemuva kokusebenzisa ulayini, umuntu , labo abagulayo, nalabo "ababuza kuphela" kuphela, udokotela uzokubhalela i-endocrinologist, ngenkathi bebhala ekhadini ngawe, "isisu sakho sithambile, asibuhlungu, isikhumba sakho sihlanzekile." Khuphukela osukwini nesikhathi esikhonjiswe kuso isigqebhezana, hlala kulayini, ubuke futhi udokotela ebhala ngesisu sami nesikhumba, bese ezwa ukuthi uJanuvia noma uGalvus sebekhanseliwe ngenxa yemihlango, manje sesithole isikhathi eside seCombogliz (ngabuka - nathi asikwenzi lokho), imichilo yaphela ngemuva kwamahora ama-2 bangenisiwe, sayina ukubhalisela inyanga ezayo - kungazelelwe unenhlanhla ngokuzayo, kepha funda ngamavithamini nokunye ukwelashwa ku-Intanethi, awukakhulile .... ".
Ngokuvamile, Dilyarochka, ungowokukhanya okungiholelayo (futhi nabangane bami abambalwa) ekulweni nalesi sonda esibi. Ngiyabonga ngomsebenzi wakho.
U-Elena, "Isici sabo esiyinhloko" akuyona into, kuyisidingo, ngoba kudinga imibiko eminingi namaphepha, kanye nokuhlolwa okuqhubekayo kwezinkampani zemishwalense, ezihlawuliswa odokotela futhi zibizwa ngokuthi i-ruble. Kuyiqiniso, lokho ababhala ukuthi abakubukanga akulona iqiniso, kungcono ukungabhali nakancane kuleli cala, kodwa kunembeza kadokotela.
"UJanuvia noma uGalvus manje sebekhanseliwe ngenxa yemithetho eyenzisiwe." Kimi, izindaba.
Kunzima, akukho mazwi. Ngokwemvelo, ngamunye unezinga lakhe le- “karma”, okudingeka lisebenze futhi angifuni ukuqhathanisa abanesifo sikashukela nohlobo 2 nohlobo 1. Kwaphela inyanga sidinga okungenani izingcezu ezingama-300 zemichilo, sinike ama-50, sithenga okusele, kubuye kudliwe okudla kwe-Deksky, okulinganiswa amashumi ezinkulungwane, nokuthi ubani ophefumula, bese kuba nangaphezulu. Ngakho-ke akuyona yonke into embi kangako, kukhona okubi kakhulu. "Moyizela futhi nizulise!", Njengakulo kathathu.
Kukhona ihlaya elihle engilikhumbulayo ezikhathini ezinjalo.
Ibutho lezempi. Isidlo sasemini I-rookie ithola isitsha sephalishi.
URookie: Ngifanele ukubeka inyama eningi!
Pheka: Beka - yidle!
URookie: Ngakho-ke angifanele!
Pheka: Akufanele - ungadli!
UDilyara, indodana yami ineminyaka engu-16. Kulo nyaka, ukukhubazeka kwakhe kwasuswa. Sivela e-Omsk
Tatiana, basichaza isizathu?
Yebo ... .. umehluko omkhulu neCanada!
Nalu udaba lwami. Ngihlala eMineralnye Vody. Ngineminyaka engama-56, ushukela 2 kwi-insulin. Sahara, ngigcina ukubheka, ngenxa yezihloko zakho, Dilyara. I-GG-6.5 ngo-Ephreli. Ngingumhlalaphansi ongasebenzi. Impesheni - izinkulungwane eziyi-9.5. Kufanele uthathe izifundo zakho ngezindleko zakho ama-omacor, trakor, amavithamini, i-octolipen, uthenge izingcezu ezingama-250 ze- “Sattelite plus” ngenyanga. Konke kuthatha cishe izinkulungwane eziyisithupha ngenyanga. Insulins (insuman ngokushesha futhi basal)
Ngiyithola mahhala, udokotela ubhala futhi umucu wokuhlola - ama-50 ama-pcs. izinyanga ezimbili, kepha azikaze ekhemisi. Izinaliti zamapeni wesirinji nazo zingapheli ekhemisi. Isiphetho sokubonga - amasheya. Ngenaliti eyodwa ngigaxaza izinsuku ezingama-4-5 (ngaphandle kwalokho ngeke kube nezinaliti ezenele). Ngiyabonga - bacwilisa okuthile okujabulisayo ne-octolipene mahhala esibhedlela sosuku (ngilinde izinyanga ezine ithuba lami). Ama-Sugars athuthukile. Kepha ngokuvamile, isifo sikashukela singamandla, ukusebenza nokuqeqeshwa ezindabeni zakho.
Futhi nansi eminye imininingwane edabukisayo ngokususwa kokukhubazeka ezinganeni. Bhala ngenjini yokusesha kaGoogle "chang.org isikhalazo sikashukela mellitus kumongameli weRussian Federation".
Silinde, Dilyara, izindatshana ezintsha zokuqeqeshwa kwethu! Amandla nempilo kuwe nakwabathandekayo bakho ”
Yebo, sengivele ngahlangabezana nezikhalazo ezisusa ukukhubazeka ezinganeni ngenxephezelo enhle. Lokhu kudabukisa kakhulu ...
I-athikili ewusizo kakhulu, esibonga ngayo. Umbono wakho ngokuqanjwa kwesiShayina sikashukela. Isipiliyoni seminyaka eyi-10, uhlobo 2, amaphilisi okwelashwa.
Lokhu ukumaketha okuhlanzekile.
I-Dilyarochka. Ngiyabonga ngale ndatshana, njengawo wonke umuntu, iyafundisa kakhulu, iyakhayo, ilungile.Ngicabanga ukuthi lesi sifo siwele kusiphetho sethu ngakho-ke sidinga ukuba ngabangani nesifo sikashukela, umsebenzi, ukubekezela kwamakhono, futhi nokuba nethemba. Uma usebenza kanzima (isisindo isikhathi ngasinye, bhala amanothi, njll, njll.) Futhi ukwenze ngentshiseko enhle, konke kuzolunga futhi ngeke udinge ukukhubazeka. Kepha, ikakhulukazi, ngeke sithuthe, singenzi lutho ngokuphelele, futhi sikhononda nje ukuthi ushukela uyagxuma, (ngivame ukuzwa emtholampilo kulayini) Ngakho-ke okuningi kuncike kithi. Njengoba i-Dilyarochka isivele ingumbhalo kumadokhumenti wokulawula, nginombuzo obaluleke kakhulu: ngabe kukhona idokhumenti elilawulayo yokuthi awukwazi ukuwushayela umuthi esibhedlela esibhedlela sosuku. Ngithenga i-Theoktatsit ngemali yami, kude nokwenza noma yiziphi izimangalo eziya emtholampilo, azivumeli kuphela lokho abazokunikeza mahhala, kuyacasula ukuthi ngithenga ngokuzithandela ngaphandle kwezimangalo futhi angikwazi. Futhi umbuzo owodwa futhi ubalulekile. Iqiniso ukuthi ngikwazi ukuba ngumdidiyeli wekhompyutha obuthakathaka, kodwa yini engingayenza: zonke izinhlamvu zakho kanye namazwana afika ku-imeyili yami futhi imibono ayivezi ezihlokweni, ngokwesibonelo, esihlokweni (R. Health) “Isibuyekezo sami mayelana nohlelo“ Isayensi Etholwayo Imnandi ukufa "kokugcina comm. ngoSepthemba 9 naku-imeyili. post imibono kanye emva kwale nombolo. Angisusi ama-imeyili imeyili, ngiyasaba ukungatholi i-imeyili elahlekile. Imeyili igcwele futhi ayikaveli ezincwadini. Uma ngibasusa nge-imeyili ngeke belahleke ngeposi bese kuvela i-athikili. UDilyarochka ngiyabonga.
Rayusha, ngiyabonga ngokubonga kwakho nangokubonisa izinkinga esizeni. Manje ngizoqonda ukuthi kungani imibono ingakhombisi. Konke kukhonjiswe kimi futhi ngacela izihlobo zami ukuthi zizobuka kwamanye amakhompyutha. Futhi, sicela ubhalise nalabo abangakhombisi amazwana ezihlokweni. Amazwana akho esihlokweni esedlule aseshicilelwe. Akukakhonjiswa? Zama ukuvuselela ikhasi izikhathi eziningi.
Sawubona Dilyara, ngiyajabula ukufunda izindatshana zakho futhi ngizitholele imininingwane eminingi ewusizo kimi. Ngathola ukutholakala kwesifo sikashukela isikhathi esingaphezu konyaka, ngineminyaka engu-56 ... ngihlala futhi ngisebenza eMoscow, kodwa i-Stavropol Territory njalo ibhalisiwe. Ngivame ukuthatha izivivinyo, ngivakashela i-endocrinologist kaningi kunendlela engingathanda ngayo. Imiphumela yokwelashwa (ukuthatha isifo sikashukela kanye ne-glucophage) i-hemoglobin enhle eyi-5.5, ngingumhlalaphansi, anginalo iqembu. Ngingathola ezinye izidakamizwa mahhala, noma ukwelashwa kwe-spa ngenxa yalesi sifo?
Ngeshwa, cha. Ukwelashwa kweSanatorium akuboniswa wena mahhala, futhi ungathola imishanguzo ngokwesifo sakho ngokuya ngohlu lwesifunda. Kodwa-ke, kwezinye izifunda, odokotela bangahle banikeze imiyalo hhayi yesifo sikashukela kuphela, kodwa futhi nokunciphisa umfutho wegazi, ngokwesibonelo. Ungaxhumana nodokotela wakho ngalokhu.
Dilyara, ngiyabonga ngomsebenzi wakho - welapha, kumasiko akhohliwe kakhulu wezokwelapha zaseRussia, hhayi ngeziqu kuphela, kodwa nangezinhliziyo zakho. Umama wami uneminyaka engama-88, uthokozile, uhlakaniphile futhi unethemba - ungamona omncane. Isifo sikashukela 2 ku-insulin asinxephezeliwe - ushukela osheshayo 5.5 (ins.HIMULIN NPH 13 amayunithi + Diabeteson 60 1tab), ngemuva kwasemini amahora 2 ushukela 11, ngaphambi kokudla ushukela 8, ins. amayunithi we-chymulin npc 4, ngemuva kwama-2 ushukela 12. GlycGemogl-7.9.
Asiyi ku-"udokotela" i-Endocrinologist (irekhodi lenyanga eyodwa nengxenye). ukunganaki kwabagulayo (iminyaka eyi-10, angikaze nje ngibheke imilenze yami, njll, kodwa futhi angibuzwanga) futhi yize SIYAZA NGOKUFINYELELA KOKUHLOLA, azikho izinkomba zokuhlolwa, noma .... Umtholampilo ukhonza isigamu senkulungwane yedolobha lekhulu le-Krasnodar Territory - AKUKHO nhliziyo, AKUSEKHONA opharetha, AKUKHO udokotela ohlinza imithambo, kukhona nodokotela oyi-neurologist, kepha irekhodi linezinyanga eziyi-1-1,5 futhi, uma kuyi-LUCKY, ngokuzayo lapho ubuya enyangeni nesigamu.
Ngibonga kumelaphi, yize enquma umuthi futhi anikeze ama-TIP. Kungakho NIYABONGA.
Nginamahloni ngezwe lami, ngosizo olunjalo kwabagulayo.Futhi umama waqala njengomhlengikazi ngesikhathi seMpi, wasindisa abalimele ngaphansi kokuqhuma kwamabhomu, kwathi ngonyaka we-46 wokudla, PULSING from HUNGER, wasebenza njenge-ambulensi - futhi lokhu KUVELA EMNYANGWINI nge-2-3 km ngocingo ngalunye .... Izinaliti zesirinji (1 ngemijovo engu-5-7), njll., Sizithenga neminye imithi.
INumeri Septhemba 10 UMongameli Putin nePeople's Front babamba umbukiso - izingxoxo ngezinkinga zezempilo; ngakusasa kuthelevishini, uMfundaze Bornstein nodokotela womphakathi uRoshal bancome uNgqongqoshe Wezempilo (mhlawumbe ngoba enezifundo zobudokotela). KWENZEKA, njengonembeza)
Futhi ngenxa yalokho siphila nesifo sikashukela, eCANADA naseRUSSIA.
Ntambama enhle, Dilyara, wayenza kanjani indodana yakho, igcotshwe kanjani, inhle kanjani esikoleni ayizange iye empompini, ngifundile ukuthi unezinkinga ngayo? Indodana yami ineminyaka engu-8 ubudala, isifo sikashukela sineminyaka engu-2 ubudala, i-glycated ingowokugcina ongu-5.9 (rose). Ushukela waqala ukweqa wokugcina / amasonto amabili ngemuva kokuphefumula kokuphefumula. Empompini iminyaka emi-2. Ngemuva kwamaviki ama-2, ushukela weqa, ikakhulukazi ebusuku kanti ekuseni ngemuva kokudla kwasekuseni, i-basal ingezwe ngamaphesenti angama-30, kubonakala sengathi ivamile, kepha inkathazo inokudla ... Ngaphambi kokudla ngo-4,3-5, ngemuva kokudla ngemuva kwamahora ama-2 7.7-8.7. Kithina amahlaya amaningi njalo. Sidla ikakhulukazi amaprotheni, ama-carbohydrate ngosuku angabi ngaphezu kwe-4 XE, imifino eminingi. Silinganisa izikhathi ezi-8-10 max ngosuku, ebusuku ngivuka amahlandla ama-2 ngihlole. Umgomo wethu ngu-4.5-5.0. I-Insulin Novorapid. Akunamaprotheni omchamo, kepha i-cholesterol iphezulu kakhulu, ngibhalise kwisifo sikashukela, bathuthukisa ukudla okune-carb ephansi, futhi uzizwa kanjani ngale ndlela?
Sawubona, Natalya. Senza kahle. Azikashintshi epompini kuze kube manje. Une-GG enhle, asikho isidingo sokwethuka. Uma uthi esiswini esingenalutho une-4.3-5.0, bese kuthi ngemuva kwamahora ama-2 kuye ku-8.7, lokhu kujwayelekile. Uma uphampu, awusebenzisi ukuqapha? Noma ufuna ushukela wokuzila futhi ngemuva kwamahora ama-2 ngokufanayo? Lokhu kwenzeka kakhulu. Ebantwini abaphilile, ushukela ngemuva kokudla ungakhuphukela ku-8-9 noma ngaphezulu ngehora lokuqala, abantu abaningi abazi ngalokho. I-Xc ngokuqinisekile izophakanyiswa, ngoba udla ukudla okunamafutha, kepha kungenzeka ukuthi awubhekile ukubonwa kwe-lipid, nginesiqiniseko sokuthi inyukelwe i-HDL. Nginombono omuhle ngokudla okuphakelwa kwe-carb ephansi, kepha angikaze nginqume ngezingane ezincane kuze kube manje. Imizwa ephikisana kakhulu. UBronstein ngokwakhe ushintshele kuma-carbohydrate asemncane lapho esekhulile, kuyamangaza ukuthi akasitholanga isifundo esisodwa sezingane ekudleni okuphansi kwe-carb nokuthi uluphi uhlobo lokudla lwezingane olungabhekwa njenge-low-carb, ngoba umzimba wengane usebenza ngokuhlukile.
Usenesikhathi esingakanani kokudla okuphansi kwe-carb? I-4XE - ingaba ama-carbohydrate akhanyayo noma ingabe onke ama-carbohydrate, aze afike kuma-carbohydrate asuka kukhukhamba kanye nemifino? Yini amandla wokukhula? Faka ama-boluses noma ngemuva kuphela?
Ngiyabonga ngale ndatshana, ngisafuna ukwazi ukuthi abantu bakwamanye amazwe baphathwa kanjani.
Wena, bhala lapha, ukuthi umuntu onesifo sikashukela ebudaleni angasebenza ngempumelelo?! Ngabe lokhu kubangani bakho? Umuntu nomuntu ngamunye, awudingi ukwazi ngalokhu! Eyokuqala, igijima njenge-elk, kanti enye imbi ukusuka ku-12ml, ngaze ngafika ku-23. Ushukela watholakala okokuqala ebangeni le-10, kepha ngaphambi kweminyaka engama-45 ubudala kwakujwayelekile. Amagundane agulayo kusukela ebuntwaneni. Futhi konke kuphuma sekwephuze kakhulu. Kuphela lapho ngathola ukulimala emlenzeni futhi ngashaya umgogodla, ukunyakaza kwakulinganiselwe, ushukela wawuphuma kuyo yonke inkazimulo yayo. Masinyane nje ngaphambi kwe-15, yafika nje yema ngezinyawo zami. I-edema esabekayo, ubomvu bezikebhe, SHIELD. Welulama ngokushesha okukhulu. Ngokuvamile, zonke izifo zaphuma. Manje, ngine-3 gr. in-ti. Ku-2-insulin, kunzima kimi ukusebenza, ngoba ebusuku ngigijimela ethoyilethi kaningi. Ekuseni, cha. Uma ungadli isikhathi eside, kuqala ukuba mnyama emehlweni akho futhi uzizwe ugula! Ngihamba cishe njalo ngibuhlungu emuva nangemilenze. Into eyodwa engingayisho. Umsoco nokuhamba, into ebaluleke kakhulu kwisifo sikashukela ukungabi nayo. Futhi kuthiwani ngokudla kwami ​​okunempilo? Akunjalo! Ezinsukwini ezimbalwa angizukudinga i-insulin, ngoba ngeke kube nokudla! Impesheni incane, akukho kudla okuhlala kuncane kakhulu, ngoba. ngaphezu kokudla, futhi udinga ukugeza, ukugeza, njll. Uthole kabili umsebenzi.Kakhulu kangangokuba akukho okudingekayo! Ngakho-ke ukusho ukuthi UKUPHAKAMA NONKE NGEMIFUTHA KUNGENZA KUSEBENZA, FALSE! Uvikela isimo se-Dilyar, esingafuni ukunaka ngokuphelele ushukela futhi ushaya izinsimbi ukuthi isifo sikashukela sithatha umlingiswa osongela omkhulu! Akukho ukusekelwa okuvela kuhulumeni, ngaphandle kokuthi, njengezidakamizwa zamahhala, bese kuthi kuphela ama-insulin kanye nemichilo yokuhlola (enikeza umkhawulo kakhulu). Futhi, iqiniso lokuthi ukudla kunoshevu ngamafutha esundu, ukuthi futhi (enyakatho, ikakhulukazi e-WINTER) awungeke uthenge imifino, izithelo, uphile okusanhlamvu okufanayo, okusuka ushukela kuphume khona lapho! Futhi, uma impesheni incane, khona-ke akukho UKUSEKELWA (kubantu ushukela)! Njengoba nginethrafikhi elinganiselwe, ngibuze abasebenza kwezenhlalo uma benamakhuphoni amahhala echibini, noma iziphi izikhungo zokuzilolonga zabantu abanjengami abanethrafikhi elinganiselwe, ngathola impendulo - CHA. Ngakho-ke kuvela noma kudle, noma ukhokhele ichibi. Uyokhokhela ipuli, akukho okutheni okudliwayo, futhi uma kungekho lutho, khona-ke ipuli alidingeki, ngeke kube namandla. ICanada ingcono kancane, kepha imali isadingeka yonke indawo. Ngandlela thile wena entweni ebaluleke kakhulu manje ukhohlwa IMALI! Akekho osidingayo! Isifundazwe sethu sikulungele ukusiza wonke umuntu phesheya, kepha asifuni ukwazi ngabantu abahluphekayo abagulayo ezweni labo. Ngakho-ke zonke izindatshana zakho zilungile, kepha ungenzi mqondo ngaphandle kwemali. Manje, futhi ngifuna ukuthola umsebenzi, kepha ngisafuna ukumthola. Ngomsebenzi wami wangaphambili, ngidinga i-FEET, ngigijime, kodwa angikwazi ukugijima manje! Yebo, futhi udinga ukwaba imali ethile kwi-Intanethi, futhi angikaze ngiyisebenzise izinyanga ezingaphezu kweziyisithupha manje. Umqondo bekuwukubhalela uhulumeni, ukuze iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus (federal on insulin kanye nempesheni encane) amakhuphoni okudla (imifino, izithelo, leyo mikhiqizo lapho ushukela ungavuki khona) yabelwe eceleni, kepha eyethu yatshalwa, kepha ayiyona sizoba. Lapha siphila!
Irina, kungani ushesha nhlobo? UDilyara akazange asho ukuthi wonke umuntu angasebenza nesifo sikashukela futhi hhayi wonke umuntu osebenzayo, futhi abanye banoshukela ofinyelela ku-40, kepha ushukela onjalo ungaboniswa kuphela i- "SATELLIT", amanye ama-glucometer awakhombisi ngaphezu kwe-32 futhi akukho lutho angathemba ngalo, umuzwa wokuthi ukumangalela kwesimo, uzokhulisa ushukela omningi kuphela. Kuningi okuhle, kuhamba ngamandla futhi kuzoba lula kakhulu ukubekezelela lesi sifo. Irochka ikunika imichilo yokuhlola (okungenani okungenani okuncane) Futhi iminyaka engu-10 angikaze nginikezwe umucu owodwa futhi banikezwe izinaliti kathathu, izingcezu ezi-4 inye, i-insulin ayinikezwa njalo ngesilinganiso esifanele, kodwa uma uzihlupha ngazo zonke lezi zinkathazo, khona-ke ungalahlekelwa yimilenze yakho uhambe uyimpumputhe ugqoke zonke izinhlobo zamaqhinga angcolile. Ungapheli amandla, ungagxili ekhaleni lakho, futhi maye kwabodokotela abasiphoxa lapho benquma imishanguzo, masifise impilo YOKOMOYA futhi sizozisola ngayo, ngoba abazi ukuthi benzani. Ukubekezela kuwe Irina nokukhululeka kulesi sifo. Futhi kuwe Dilyara, sibonga kakhulu ngohlelo lwethu lokufundisa
Sawubona Tamara! Senza kuphela lokho "sidinga ukuzwelana nodokotela", impilo yethu incike komunye umuntu. Kepha akekho ofuna ukuphatha abagulayo ngokunaka okufanele. Akudingeki nje ukukhononda mayelana neziza, kepha ukuya ezimeni eziphakeme futhi awudingi ukungitshela ukuthi ngeke basizwe. Abangeke bezwe okukodwa, okubili, futhi lapho wonke umuntu obhala ngabo uqobo kumawebhusayithi ezobhala konke lokhu kuya phezulu: abaphathi, uMnyango Wezempilo, banefoni mahhala nakho konke okubhalwa yilowo nalowo lapha, ungasho konke ocingweni ubhale amagama akho . Thina republic futhi sinezinkinga ngazo zombili imichilo yokuhlola ne-insulin, njengoba amakhemisi lapha kwesinye isikhathi azinqumela ngokwawo ukuthi yini okufanele anikeze. Ngamacala anjalo, sinomnyango wethu wezempilo futhi sesakhe nomnyango wezikhalazo kubasakazi. Abantu bayabiza futhi baxazulule zonke izingqinamba. Ah, odokotela ngokuvamile bayangesaba, ngoba ngaphezu kokukodwa kuphendukele kumin-in. Ngakho-ke, ngihlala nginemichilo yokuhlola, i-insulin neminye imithi. Kule nyanga ngiya esibhedlela republican, ngoba futhi asinabo odokotela abahle, kunqunywa imithi kuphela.Ngakho-ke angisilo ukukhala, kodwa ngizama ukwenza odokotela basebenze ngandlela thile. Mina, ngicabanga kanjalo, uma mina nabanye abantu sizinikela ngokuphelele ekusebenzeni kwabo futhi sikwenza ngendlela okufanele, ngakho kungani odokotela kufanele basebenze “ngokungenamikhono”. Thina ngokwethu sibafundisile ukusebenza, noma kunjalo! Uma, okungenani isekhondi ngayinye ibenza basebenze (vele ushayele i-min.health. District, republic, njll kanye neMIN.ROSSII) bese ulinda kancane, khona-ke izimpendulo zizoba nesiqiniseko. Nathi, ngokubiza amaminithi. Republic, bese kungakapheli isonto bese uvivinya umucu ne-insulin. Yebo, ngingumzuzi wombuso. Ukuze, ngokungafani nabanye, angigcini ngokukhala futhi ngingamemezi kuwo wonke umuntu (njengawe ku-TV) KAKHULU KAKHULU, kodwa ngifuna isimo sengqondo esinenhlonipho maqondana nami futhi NGIYAMUKELA KONKE. Ngendlela, kunzima ukuthola ukuqokwa kudokotela okokuqala ngqa ukuya kudokotela, labo abale esibhedlela nange-insulin, akunankinga. Ngezinsuku ezithile zokwamukelwa, kunewashi lapho kunqunywe khona i-insulin, imichilo yokuhlola neminye imithi futhi ithikithi linikezwa ngokushesha. Ngakho-ke konke kuncike kwiziguli zase-US! Ngolunye usuku nje ngathatha umucu wokuvivinya futhi ngahlangana nonina wesinye isiguli, naye wakhononda ngoshukela omkhulu wendodana yakhe. Akukho okusisizayo esibhedlela sethu. Ngayala ukuthi ngiqale ngiye eRepublican, bese kuthi, uma kungasizi, bese kukhipha isibalo eSt. Kukhona iwadi enhle yabanesifo sikashukela. Futhi, ama-sanatorium, uma enezimali zawo. Ngingathola ithikithi lamahhala lweminyaka emithathu, kodwa angilitholi, ngoba mahhala, mahhala, kepha usadinga okwakho, kodwa anginakho. Kungakho ngiya esibhedlela saseRiphabhulikhi ukuyolashwa, ngithole umsebenzi bese ngivele ngithola ithikithi futhi ngizolithola.
Ngiyabonga Dilyara ngempendulo yakho ecacile nenosizo yombuzo wami! Usuku Oluhle Lothisha. Yebo, ungamangali. UnguMfundisi wethu.
Ngibhalela u-Irina (umbono wakhe ungo-10/05/2015).
Irina, angivumelani nawe! Ngingu-Elena (umbono wami uvela ku-09.25.2015). Into esemqoka akuyona imali, kepha isifiso somuntu siqu sokulwa nalesi sifo. Futhi u-Dilyara usisiza nje, njengodokotela futhi umama wengane yesifo sikashukela.
Kunoma yimuphi umtholampilo kunehhovisi lesibhedlela sosuku, lapho bachitha khona imishanguzo mahhala. Zama ukufika lapho. Futhi ngaphezulu. Ubhala ngokuntuleka kokunyakaza. Kepha ngemuva kwakho konke kunehhovisi lamahhala lokuzivocavoca lomzimba emtholampilo ofanayo. Ungafunda ukuzivocavoca okudingayo lapho futhi uzijwayeze khona ekhaya. Futhi angikwazi ukuthenga ichibi, ngiyakwenza ekhaya.
Bengihlala ngihlushwa ukuchama njalo ebusuku kuze kube yilapho ngibeka ushukela ukuze ngibonge imibhalo kaDilyara: Ngikala ukudla, ngicabanga ukuthi i-XE, angidli ngaphezu kwe-10XE ngosuku, ngifafaza ushukela omningi nge-insulin emfushane. Manje ngivuka ebusuku izikhathi ezi-1-2, futhi ngaphambili - 5-6. Lapho uya khona.
Irina, ngitshele, yini wena uqobo lwakho owenze yona ukuze uthuthukise inkambo yesifo sikashukela? Uyazi konke ngesifo sakho sikashukela?
Irina, ungapheli amandla! Ngesifo kanye nempesheni encane ungalwa! Inhlanhla noshukela omuhle!
Hhayi-ke, uma u-Elena ungaphila ku-3 izinkulungwane, khona-ke u-FlAG You HAND. Mina, umfelokazi, anginamuntu ongangisiza. Ngihlala enyakatho, amanani ethu akude naseningizimu nezithelo azikhuphuki. Imifino nayo iyabiza. Inkinga enkulu enginayo ayikaze ibe noshukela, kodwa emuva ngomlenze wami. Ngemuva kwalokhu kulimala, ngathola lonke ushukela futhi ngaphuma. Mina, iminyaka emi-2, ngidla ngokuhamba ngudokotela nodokotela oyi-endocrinologist ngasho ukuthi unhlangothi lwasemuva luyakhathaza isikhathi eside. Ngokukhokhela amakilasi wokuzivocavoca wamahhala emtholampilo, khona-ke sinayo AWA benginentshisekelo. Alikho ipuli lamahhala elingifanela kakhulu. Yebo, ngezindleko zesibhedlela sosuku. Sinayo, kodwa kufanele silinde isikhathi eside futhi siye lapho, nathi, sidinga imali. Kulula ukuya esibhedlela saseRiphabhulikhi, esivuswa unyaka, engizokwenza manje.
Sengivele ngizoya esibhedlela kulenyanga. Siphinde sibe nesikhathi sokufika ezinyangeni ezi-4. Kepha ngaba nenhlanhla yokuthi manje udokotela omuhle kakhulu usebenza njengomphathi. Ngazibiza futhi banginikeza indawo izinyanga ezimbili. Akulula kanjalo. Kungani ngiphuthuma lapho ngaphezulu, ngoba lapho abahlaziyi benza kangcono kunokwethu nokuningi. Ukuhlolwa kucishe kuphelele kuzo zonke izinto eziphilayo. Thatha i-insulin.Kulowo nyaka, ngezinsuku eziyi-10 kubuhlungu umgogodla wami nomlenze wami kwasuswa (ubulukhuni basala. Ngangikude nokugijima, kodwa namanje), ngakho-ke ngangizibona ngingumuntu ophelele ngokugcwele, noma ngisanensulin. Ah, alikho iphuzu lokugcina idayari yokudla okwamanje, ngoba okokuqala, akunakho ukondla okujwayelekile, futhi okwesibili, ngize ngithathe inkambo yokwehla, ngizobe senginayo indlala ebabazekayo + yokuxineka. Ngemuva kokwehla okungu-5, kuba lula futhi ungagijimeli ukudla. Kwafika isicanucanu, isiyezi, njengoba ufuna ukudla. Ukuntuleka okukhulu kwamavithamini. Ngatshela umngani wami ukuthi ungaziphilelela izinkulungwane ezintathu, kanti yena, ngemuva kokuhlaselwa isifo sohlangothi eneminyaka engama-42, nempesheni yakhe nayo incane, kungcono angizukubhala amagama awasho. Ngicabanga ukuthi ungaqagela!
UDilyara. Ngiyabonga ngempendulo, namuhla wonke amazwana avele, mhlawumbe kunento engiyivela kukhompyutha. Bengicabanga ukuthi ulanda ukuphawula. kuzindatshana zangemuva, futhi manje sengibonile ukuthi akuyona, ngasikhathi sinye ngizocela indodakazi yami ukuthi imvumele ukuthi abone ukuthi yini okungahambi kahle ngami, kepha ngibonga uNkulunkulu abonakale namuhla.
U-Irina, ngiyabonga ngeFLAG- Ngizoyigcina! Ngiyajabula ngawe ukuthi ulwela ukuya esibhedlela saseRepublican! Ngendlela, nami ngingumfelokazi! Kepha lokhu akusebenzi! Funda izindatshana ze-Dilyara ngaphezulu! Gcina idayari yokudla njengoba Dilar encoma! Kuyangisiza kakhulu: Ngiyazi ukuthi kufanele ngidle i-XE ngenani elithile le-insulin.
Inhlanhla, Irina, nokuhle ngokwengeziwe! Awuwedwa!
Sawubona, Dilyara! Ngiyagula nginesifo sikashukela2 ngiphuza amaphilisi, i-glybomet izama ukugcina ukudla, kepha muva nje ushukela waqala ukukhuphuka esiswini esingenalutho6,9_7,1a kusihlwa kungafinyelela ku-12 Ngabe ngiphuza uhhafu wethebhulethi ngokudla kwasekuseni futhi kusihlwa i-glybomet ingakhulisa umthamo? Manje ngithole i-goiter ukuthi ngidinga ukubotshwa, ngisesaba kakhulu .I-hypertonic iminyaka engu-3 edlule yayine-hemorrhage
U-Olga, lo ngumbuzo oyimfihlo. Ngeke ngikwazi ukumphendula ngokushesha. uma ufisa, ngingabamba ukubonisana. Ukuze wenze lokhu, gcwalisa leli fomu kuleli khasi http://saxarvnorme.ru/kontakty
UDilyara ngiyabonga kakhulu ngezindatshana zakho, zingusizo kakhulu kimi. Ngine-Type 2, i-asthma ye-bronchial, umfutho wegazi ophakeme. Ngineminyaka engu-45. Manje ngithatha i-metaphormin, kepha ngijuluka kakhulu ebusuku, imilenze yami iqale ukulimala muva nje, ikakhulukazi izinzwane zami, kwesinye isikhathi isiyezi esibuhlungu. i-tinnitus Ushukela esiswini esingenalutho i-4.8, ngemuva kokuhlangana -8.9 i-glucose metres-akuchek esebenzayo. Ukusuka kwesifuba somoya ngithatha i-Seretide 500. kusuka kushukela-metformin sandoz-500, kusuka ku-hypertension-enap-n 10 mg. Le mishanguzo ingahlanganiswa? Ngiyabonga kakhulu.
Bahlangana ngokujwayelekile. Yini hemoglobin yakho yokugcina?
Okokuqala, sibonga kakhulu kudokotela onomusa lo Dilara ngalesi siza. Kuphela lapha ungathola izinto eziwusizo kakhulu!
Okwesibili, ngivela edolobheni laseVladimir. NGESIKHATHI lapho ngigula sanikezwa imivimbo yokuvivinya, isirinji, izinaliti, noma ngisho nama-glucometer. Esikhungweni sokunakekelwa kwasemini, sithenga yonke imishanguzo ye-droppers kanye nemijovo ngemali ekhokhwayo. ama-nicotines kanye ne-riboxin. I-Berlition nokunye okunjalo kuyabiza ikakhulukazi.
Ama-insulin anikezwa - isikhathi ngasinye ahlukile, atholakala ekhemisi ekhethayo, hhayi okuhle kakhulu, kunjalo, ngo-December-Januwari, njengomthetho, - imali isiphelile, zithenge ngokwakho. I-Metformin ayibhalwanga nhlobo kulezi zinyanga ezimbili. Futhi uma mina Ngijovwa amahlandla ayisihlanu ngosuku nemithamo emikhulu, khona-ke ngempesheni encane lokhu cishe akunakwenzeka .. Ngoba - masibe nomusa futhi sibekezele komunye nomunye. EMoscow kuphela, iziguli (hhayi yonke indawo) zingakuthola okufunwa ngumthetho. Futhi kwezinye izifunda - akwenzeki. Ngakho-ke, ama-Muscovites - ungasicasuli!
Sawubona Gulnara. Ngihlala ngifunda isiza sakho ngokucophelela futhi ngithola ukuthi siwusizo kakhulu. Ngineminyaka emi-3 yesifo sikashukela sohlobo lwe-2. Ku-2 insulin, ku-18 ubude kanye nakuma-3 ku-5 amafushane. Ngineminyaka engama-33 kuma-hormone kusuka kuma-12 kuye kwangama-40 mg e-methylprednisolone - kuya ngenkambo yesifo esiyisisekelo -I-asthma ye-bronchial. Nginamathela ekudleni okuphansi kwe-carb - empeleni ungadli sinkwa noma okusanhlamvu. Kuya ngamahomoni athathwe, ushukela uguquguquka kakhulu, ngakho-ke ngaphandle kwemivimbo yokuhlolwa nganoma iyiphi indlela.Phambilini, yize bekunomkhawulo, banikeze imichilo yokuhlola nge-satellite, ngo-2015 benqaba ngokuphelele. Umugqa wokuhlola wawungekho ohlwini lwemithi yamahhala ngaphambili, futhi manje ayisekho. Ngivela kuYelabuga. Mhlawumbe uyazi ukuthi yimiphi imibhalo ongabheka kuyo ukuthola iqiniso, ngoba abaningi bayayithola manje?
Sawubona, Vladimir. Umbhali webhulogi, isb. Igama lami nginguDilyara. Uma ungenalo iqembu lokukhubazeka, ngeshwa ngeke uyibone imivimbo. Uma kuneqembu, khona-ke ungabhekisa ohlwini lwezidakamizwa zezinzuzo zikahulumeni.
Sawubona Dilyara. Ngiyabonga ngempendulo yakho esisheshayo. Njengoba ngikuqonda kahle, imivimbo iqukethe i-oda loMnyango Wezempilo ngoSepthemba 11, 2007 No. 582, kepha ayikho ohlwini lwezinzuzo.
Manje ngami nezilonda zami. Ngihlala e-Elabuga. Ngineminyaka engama-67 ubudala. Ngina-33 iminyaka engama-hormonal-12 mg ye-methylprednisolone. Iqembu lesibili lokukhubazeka elinesifo esikhulu yisifo somoya (brashchial asthma) kanye nesifo esili-12 esidalwa ama-hormone. Ngo-2013 ngathola ukuhlinzwa nge-vertebral hernia, ngasizathu simbe, bagcina i-18 mg ye-hexamethasone ezinsukwini eziyi-12 ngaphambi kokuhlinzwa, bahumusha ama-hormone ami izikhathi ezingama-20. Ngenxa yalokho, thayipha isifo sikashukela esincike ku-2. Manje ngine-levemir yansuku zonke ne-5 bioinsulin R isigamu sehora ngaphambi kokudla. ukubanda kubala g U-Oromon kufanele akhuphuke abe ngamathebhulethi ayi-10 -40 mg, kanti ushukela nawo uyakhuphuka - kufanele ukhuphule i-insulin, futhi usike ukudla cishe ukubulawa yindlala, naphezu kokudla okungenama-carbohydrate. Lapho kungekho okubabayo okwesikhathi eside, i-hemoglobin ye-glycated ndawo ndawo ndawo ezungeze u-5.7.
Inkinga enkulu manje yimilenze yami. Ukusuka lapho ngihlinzwa i-vertebral hernia, kanye nokuqala kwesifo sikashukela, izinyanga ezintathu zadlula lapho ngatholakala ukuthi nginesifo sikashukela .. Ngalesi sikhathi ngaphelelwa isisindo esingu-20 kg, futhi imilenze yami yenqaba ukululama esikhundleni sokululama okulindelekile - ngawa. Lapho ngiphatha isifo sikashukela, ngaqhubeka nokudla okungenama-carbohydrate futhi ngakuletha ku-glycated kwaba okujwayelekile - kwaba khona intuthuko - ngaqala ukuhamba ngenduku, amahlandla amaningi enza i-intravenous lipoic acid ne-pentoxifyline - kwasiza, kepha esinye isifo se-catarrhal kanye nokwanda komthamo wama-hormone kwenza yonke into ibe manje. Ngihamba cishe amamitha angama-400, kepha kuphela ngasendlini, ngoba emgwaqweni, uma ngiwela, kuzofanela ngiqambe amanga kuze kube yilapho umuntu ongiphatha ngendlela engaziwa ukuthi angithathaphi. Imisipha yamathanga ethambile kakhulu. Manje senginesisindo esingu-65 kg, ngaphambi kuka-77. carbohydrate - Loeb, iphalishi kuphakamisa ushukela ngcono insulini umthamo akuyona efiselekayo.
Ngokuvamile, ngabhala ngoba ngifuna ukukhuluma.
Uma ululeka noma yini, ngiyojabula. Ozithobayo, uVladimir.
Vladimir, imithamo yakho ayimikhulu njengoba bengicabanga lapho uthatha i-HA. Musa ukugcina ukudla okuqinile, vumela i-carbohydrate. Futhi faka i-insulin engakanani njengoba udinga. Wake wanikezwa ama-hormone ama-anabolic noma ama-hormone okukhula? Ngemuva kwakho konke, bagcina izicubu zomzimba, ngokungafani ne-HA. Ngabe uthathe uvithamini D?
Ngiyabonga Dilyara. Ngizokwenza njalo ngama-carbohydrate. Ngifunde nge-anabolics ngaze ngacela ukuthi ngithole umuthi (ngemali), kepha kwavela ukuthi cishe akunakwenzeka, ngikwazile ukuthenga i-ampoule eyodwa kuphela - kulula kakhulu ngomlutha wezidakamizwa. ngiphakamisile, kepha ngine-degree engu-4 yamathambo ngokutholakala okuphezulu kwama-fractures - ngiphula izimbambo njalo. Kwi-X-ray, iminonjana engaphezu kweshumi yokuqhekeka kweqhwa isivele ibonakala. Eminyakeni engu-4 edlule, kwahlolwa i-RCH, lapho kwatuswa i-alendronic acid. Ngiyayithenga futhi ngiyiphuza njalo; kuvela ukuthi iyabiza kancane, kepha iyasiza, yize i-zollendron acid isohlwini lweyamahhala, kepha ayinikeli.
Dilyara, ngicela ungitshele, uma kungenzeka, ukuthi lubhalwe phansi yini igama lemithi yamahhala yabazuzi be federal. Ngiyazi i-oda likaHulumeni waseRussia Federation langoDisemba 30, 2014 No. 2782-r lapho kunezicelo ezimbili. .№1-uhlu lwezidakamizwa ezibalulekile zokusetshenziswa kwezokwelapha kanye nesithasiselo No. 2 uhlu lwezidakamizwa olunqunywe yisinqumo sokubhaliswa kwezokwelapha. Manje iyiphi? ngaphandle kwalokho odokotela nekhemisi banezinhlu ezingenazicucu.
Cishe uhlu lwenombolo 1.Ngiyavuma ukuthi ama-anabolic steroid nama-hormone okukhula kunzima ukunquma, kuphela uma kukhonjisiwe Ungahlolwa ukuthi kukhona ukushoda kwala mahomoni? Yize ngithandabuza impela ukuthi bazonikezwa mahhala. Ungazama ukungena kubasubathi. Njengoba une-osteoporosis, khona-ke udinga i-vitamin D, noma ngaphandle kokuhlaziywa konke kuyacaca lapha. Isisekelo sokwelashwa kwamathambo manje se-bisphosphonates + Vit D + calcium amalungiselelo.
Dilyara, ngiyabonga. Uma uhlu lwezinombolo 1 luhle kakhulu. Asikhulumi nge-anabolics yamahhala.
Futhi kuthiwani ekhemisi? Ngokusobala lesi isidakamizwa kusuka kuhlu olusetshenziswayo.
Dilyara, usuku oluhle!
Ngiyabonga, izimpendulo zakho zivele ku-blog namuhla!
Namuhla ngithole i-insulin ngezinzuzo zezifunda (i-Stavropol Territory) - i-insuman basal ne-insuman ngokushesha emapeni weSolostar. Umhlengikazi uxwayise ngokuthi maduze bazodlulisela kuma-insulin aseRussia ezimpondweni, bazithambise ngamasirinji ajwayelekile, njengoba ukuthenga i-insulin engeniswa ngohlobo lwemali akunanzuzo. Kepha kuma-syringes, intengo yokuhlukanisa ngamayunithi ama-2. Ukuhlukaniswa kwesigamu kunzima ukukuthayipha. Ubala konke ngezibambo zeSolostar njengoba ufundisile, waze wabala “imisila”. Ishaye futhi idle amayunithi amaningi e-insulin.
Kepha kuthiwani uma kudluliselwa kuma-syringes ajwayelekile? Fakani engeza amayunithi amabili kwi-insulin efakiwe, noma zama ukuthola uhhafu womjovo ngesirinji?
Elena, ungakwazi futhi ukufaka umjovo wesirinji, ngokunemba ngokwengeziwe. Kuphela akuyona elula, ngiyaqonda. Udokotela kudingeka afunde ukuthi udonsa kanjani, usengakwazi ukuzalanisa i-insulin bese ufaka imithamo enembile. Ama-syringes ahlukile, noma ekukhuphukeni kwamayunithi angama-0.5. Kungadingeka ukushicilela i-athikili ngalesi sihloko. I-athikili ilele, kepha izandla azifinyeleli ekuyiqedeni.
Sizolinda i-athikili futhi sinethemba lokuthola ulwazi olusha. Ngicabanga ukuthi imininingwane yama-syringes ne-insulin dilution (ngizwa okokuqala!) Ayisebenzi kimi kuphela!
Kunzima impela ukuthola ukukhubazeka ngenxa yesifo sikashukela i-mellitus, ngoba ingakhubazeka .... hlobo luni lomngane ongazi ukuthi ugijima kanjani njengenkunzi yenkomo, unoshukela omningi ..... Wagijimela esibhedlela, wathola udokotela “omuhle” futhi wathenga ukhubazeko lweqembu 1 sikashukela))) manje usenalo uqweqwe futhi uthola impesheni ... ujabule njengendlovu)))
Siyabonga ngolwazi. I-athikili ewusizo kakhulu.